Ignacio Sala | | အချိန်အား, စုံတွဲနှင့်လိင်
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) ၏အဆိုအရဆေးစွဲခြင်းသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါဖြစ်သည် ၀ တ္ထုတစ်ခု၊ လှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ်ဆက်နွယ်မှုတစ်ခုအားမှီခိုခြင်းသို့မဟုတ်လိုအပ်မှုကိုဖန်တီးသည်။ တစ် ဦး စွဲရောဂါရှာဖွေနိုင်ရန်အတွက်, ဇီဝဗေဒ, မျိုးရိုးဗီဇ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လူမှုရေးအချက်များပါဝင်သောအများအပြားဆိုင်းဘုတ်များနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများအတူတကွပေးထားခံရဖို့ရှိသည်။ စွဲလမ်းမှုအားစဉ်ဆက်မပြတ်ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ရောဂါအားငြင်းပယ်ခြင်းနှင့်အတွေးမှားယွင်းခြင်းများစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပွားစေသည်။
အဓိကစွဲလမ်းမှုသည်အမြဲတမ်းမူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်သေစာသုံးစွဲမှုနှင့်ဆက်နွယ်သည်၊ သို့သော်ယခုအချိန်အတန်ကြာအထိ၊ လိင်စွဲလမ်းမှုတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အခန်းကဏ္ have မှလာပြီအထူးသဖြင့်မင်းသမီးမိုက်ကယ်ဒေါက်ဂလပ်၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆေးခန်းကို ၀ င်ရောက်ခြင်း၏ရလဒ်အနေဖြင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုခံနေရသည်ဟုသူ၏ကိုယ်ပိုင်ဖော်ပြချက်များအရသိရသည်။
ဒီကိစ္စကိုရှင်းလင်းဖို့ကြိုးစားဖို့ကင်းဘရစ်ခ်ျတက္ကသိုလ်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုနေစဉ်ယောက်ျားတစ် ဦး အပေါ် ဦး နှောက်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုအများအပြားပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လေ့လာမှုအတွင်းမှာအဲဒီဟာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည့် ဦး နှောက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတည်းကိုသာလှုပ်ရှားစေပါသည် သူတို့ပစ္စည်းဥစ္စာ၏အပိုင်၌ရှိကြ၏အခါ။
နောက်ပိုင်းတွင်ကျန်းမာသန်စွမ်းသူများနှင့်လိင်စွဲသူများအား MRI များကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လိင်စွဲလမ်းပြလူများ ဦး နှောက်၏သုံးအစိတ်အပိုင်းများအတွက် ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုတိုးတက်လာခဲ့သည်: ဂလင်းတမျိုး၊ anterior cingulate ၏ cortex နှင့် ventral stratum ။ ၎င်းတို့သည်မူးယစ်ဆေးစွဲသူများအတွက်အများဆုံးစားသုံးသည့်အရာကိုမြင်သည့်အခါပိုမိုမြင့်မားသောလှုပ်ရှားမှုနှုန်းကိုမှတ်ပုံတင်သည့်နေရာများဖြစ်သည်။
5 Nymphomania နှင့် Satiriasis
လူတစ် ဦး သည်လိင်စိတ်ကျေနပ်မှုရရန်ရှာဖွေသောအခါလူတစ် ဦး သည်လိင်စွဲလမ်းကြောင်းကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားနိုင်သည် တစ်နေ့တာ၏ကြီးမားသောနေရာတွင်ရှိနေပြီးလိင်ဆက်ဆံလိုသည့်ဆန္ဒမှာလည်းမကြာခဏဖြစ်သည်။ ယေဘုယျစည်းမျဉ်းအရလိင်စွဲလမ်းသူအများစုသည်အခြားသူများမှတစ်ဆင့်မိတ်ဖက်တစ် ဦး တစ်ယောက်မှမရှိခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ကြိုးစားကြသည်။ ထို့ကြောင့်အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှသူတို့အတွက်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်လိမ်လည်မှုကမ္ဘာကြီးပေါ်ပေါက်လာသည်။
ပြင်းထန်သောလိင်ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းရန်လိင်ဆက်ဆံလိုသောဤဖိနှိပ်ချုပ်ခြယ်မှုမရှိသောဆန္ဒသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်စွဲလမ်းသူများအားလိင်တူသူများနှင့်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုသူတို့နှင့်မည်သည့်ဆက်နွယ်မှုမှမရှိသောမည်သူမဆိုနှင့်အတူသူတို့၏ဆန္ဒများကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ ဤကြိုကြားကြိုကြားဆက်ဆံရေးသည် အကယ်၍ ၎င်းတို့တွင်အနည်းဆုံးအကာအကွယ်မရှိပါကလုပ်နိုင်သည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများကူးစက်စေနိုင်ပါတယ် ၎င်းသည်သင်နေထိုင်နေသောမိတ်ဖက်သို့နောက်ဆုံးတွင်ကူးစက်နိုင်သည်။
လူအများစုသည်စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချရန်ကြိုးစားခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချခြင်း၊ ၎င်းအားဆိုလိုရင်းအားလုံးနှင့်အတူတည်ငြိမ်သောဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းရန်မလိုအပ်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်၊ လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုစွဲလမ်းသည်ဟုယူဆ။ မရပါ။ နာမည်ကဖော်ပြသည့်အတိုင်းစွဲခြင်းသည်လိင်အပေါ်မှီခိုမှုကိုဖန်တီးသည်၊ လိင်ဆန္ဒများသည်လူတစ် ဦး ၏ဘဝကဏ္ aspects အားလုံးကိုထိန်းချုပ်လာသောအခါ၎င်းသည်လိင်ဖြစ်တည်မှု၏အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလေးအနက်စိုးရိမ်ရပေမည်။ ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်မှစိတ်ပညာရှင်နှင့်စိတ်ရောဂါအထူးကုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည် hypersexual disorder ဟုခေါ်သည့်စိတ်ကျန်းမာရေးရောဂါနောက်ထပ်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ရန်အတွက်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်စုအကြားစမ်းသပ်မှုအမျိုးမျိုးပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါသုတေသီများအတည်ပြု လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲဖော်ထုတ်သည့်အခါအသုံးပြုစံ စိတ်ကျန်းမာရေးပြdifferentနာအမျိုးမျိုးရှိသောလူ ၂၀၀ ကျော်နှင့်လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ၈၈% သောလူနာများသည်မှန်ကန်စွာရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးနိုင်ခဲ့သည်။ ဤ ၈၈% သောလူနာများအနက်အများစုသည်ဤစွဲလမ်းမှု၏အကျိုးဆက်များကိုခံစားခဲ့ရသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်အလုပ်ပြုတ်ခြင်း (၁၇%)၊ အချစ်ဇာတ်လမ်းကိုအဆုံးသတ်ခြင်း (၃၉%) နှင့် ၂၈% တွင်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများကူးစက်ခံခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့်ဒီစမ်းသပ်မှုတွေကလိင်စွဲလမ်းသူ ၅၄ ရာခိုင်နှုန်းဟာ၊ အသက် ၁၈ နှစ်မတိုင်မီသူတို့၏အပြုအမူများကိုသတိပြုမိလာသည်။ သူတို့ထဲက ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်အသက် ၁၈ နှစ်နှင့် ၂၅ နှစ်အကြားရှိတက္ကသိုလ်အဆင့်တွင်သာလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုခံကြရသည်။ ဤရောဂါအမျိုးအစားကိုအသိအမှတ်ပြုရန်အသုံးအများဆုံးသောအပြုအမူများမှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းနှင့်အထူးသဖြင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများဖြစ်သည်။ မတူညီသောလူတို့နှင့်အတူအချိန်တိုင်းအိပ်ရာဝင်ခြင်းအပြင်လူ ၁၅ ယောက်နှင့်အတူမဆက်ဆံနိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ၁၂ လလုံးလုံးဒီနေ့ငါတို့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကောင်လေးတွေကိုသူတို့ဘယ်လိုထင်ကြမလဲ။ သူတို့နှင့်လိင်ဆက်ဆံလိုသောဆန္ဒများကိုဖြည့်ဆည်းရန်လူအချို့သာတွေ့ဆုံခြင်းဖြစ်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် hypersexuality, အမျိုးသမီးများ nymphomania နှင့်အမျိုးသားများတွင် satiriasis ဟုလည်းလူသိများသောလိင်စွဲလမ်းမှု လူများသည်သူတို့၏အတွေးများကိုဖြည့်ဆည်းပေးရမည့်ပုံမှန်မဟုတ်သောပြင်းထန်သောလိုအပ်ချက်ကြောင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်သည်, တစ်နေ့တာအတွက်အလုပ်ဖော်ဆက်ဆံရေးနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်မိတ်ဆွေများ၏ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ လိင်တူချစ်သူများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ လိင်တူဆက်ဆံခြင်းနှင့်လိင်တူချင်းဆက်ဆံခြင်း၊ ပြည့်တန်ဆာ၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အချို့ကိစ္စများတွင်ပင်ထိခိုက်နစ်နာသူများ၏ပြသနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အတော်များများကလိင်စွဲလမ်းမှုကိုရှာဖွေရန်ကြိုးစားခဲ့ကြသောကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ကြသည်။ အစွဲစွဲသူများနှင့်သာမန်လူများမှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာကြည့်ခြင်းနှင့်ထိတွေ့သောအခါ ဦး နှောက်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသည့်ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်၏လေ့လာမှုတွင်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
ကျွမ်းကျင်သူအချို့ကဤလူများ၏လိင်ဆက်ဆံမှုကိုအကြောင်းပြသည်ဟုဆိုသည် ဦး နှောက်ထဲမှာဇီဝဓါတုဗေဒမူမမှန်သို့မဟုတ်အချို့သောဓာတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဖြစ်သည် လိင်၊ မူးယစ်ဆေးဝါး၊ အရက်နှင့်အခြားစွဲလမ်းမှုများကိုစားသုံးခြင်းမှ ဦး နှောက်ကိုအကျိုးပေးသည်။
အခြားလေ့လာမှုများအရ ဦး နှောက်၏ medial prefrontal cortex တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကို ဦး တည်စေသည့် medial prefrontal cortex တွင်အနာစွဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကလေးဘဝနှင့်မိသားစုပြproblemsနာများအလွဲသုံးစားမှုပြproblemsနာများရှိသူများသည်ဤရောဂါကိုပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
ဒါပေမဲ့ လိင်စွဲလမ်းမှုပြbrainနာကို ဦး နှောက်မှအမြဲတမ်းဖြစ်ပေါ်စေသည်မဟုတ်ပါ သို့မဟုတ်အတိတ်ကအလွဲသုံးစားမှုပြproblemsနာများ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းအသစ်သောအာရုံခံစားမှုအသစ်များကိုရှာဖွေလိုသောအုပ်စုများကိုတွေ့ရတတ်သည်။ အကယ်၍ မေးခွန်းများရှိသူများသည်ဤအာရုံခံစားမှုကိုအသုံးပြုခြင်းကိုကောင်းစွာမစီမံနိုင်ပါကစွဲလမ်းမှုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
လိင်နှင့်စွဲစွဲသူများသည်များသောအားဖြင့်အောက်ပါလက္ခဏာများကိုတင်ပြကြသည် များစွာသောအခြားစွဲလမ်းမှဘုံဖြစ်ကြသည် မူးယစ်ဆေးဝါးကဲ့သို့သောပတ်ဝန်းကျင်၏လှည့်စားမှုနှင့်အထူးသဖြင့်ယင်းတို့ကိုခံစားနေရသူများအတွက်အန္တရာယ်အရှိဆုံးလက္ခဏာများနှင့်ပြသနာကိုငြင်းပယ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
သင်သည်သင်၏လိင် drive ကိုမထိန်းချုပ်နိုင်။
လိင်စွဲလမ်းသူများသည်လိင်ကိုကြိုက်နှစ်သက်သူတစ် ဦး ကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေနေသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူများနှင့်ပရောပရည်လုပ်ရန်အချိန်များစွာကုန်ဆုံးနိုင်သည်။
Nymphomania နှင့် Satiriasis
လိင်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုသည်အမျိုးသားများအတွက်သီးသန့်ပြproblemနာမဟုတ်ပါ၎င်းသည်အသုံးအများဆုံးဖြစ်လျှင်ပင်။ အမျိုးသမီးများတွင်လိင်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုသို့မဟုတ်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုနိုက်ဖိုမန်းနီးယားဟုခေါ်သည်။ ယောက်ျားများတွင် Satiriasis ဟုခေါ်သည်။ ထိုအသုံးအနှုန်းနှစ်ခုလုံးကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများအဖြစ်မသတ်မှတ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရောဂါများဆိုင်ရာအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ကမ္ဘာ့လူ ဦး ရေ၏ ၆% သည်ဤရောဂါခံစားနေရပြီး၎င်းတို့ထဲမှ ၂% သာအမျိုးသမီးများဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » အချိန်အား » ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုနှင့်ယင်း၏အကျိုးဆက်များ
ဟင့်အင်း၊ အဲဒါကရောဂါဖြစ်လာနိုင်တယ်၊ စွဲစေနိုင်မယ်ဆိုရင် ... ဒါပေမယ့်ဒီဆောင်းပါးထဲမှာထည့်ထားခဲ့တဲ့ကိုးကားချက်ဟာလိင်ကိုစွဲလမ်းစေနိုင်တဲ့အခြားအရာများစွာနဲ့ပါတ်သတ်ပြီးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်၊ သင်စိတ်ခံစားမှုသို့မဟုတ်လိင်မသေချာပေါက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတက်။ ဒါကကျွန်မရဲ့နှိမ့်ချတဲ့အမြင်ပါ
ငါထင်တာကတော့သူတို့တီထွင်ခဲ့တာတွေထဲမှာအဆိုးဆုံးပဲ။ ယောက်ျားတော်တော်များများဟာသူတို့ရဲ့စွဲလမ်းမှုကြောင့်သူတို့ရဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့မတွေ့ဆုံနိုင်ကြဘူး။ ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးတွေအတွက်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေများစွာဖြစ်ပေါ်စေတယ်၊ ​​ဒါကဖန်တီးမှုကြောင့်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့စိတ်ကူးယဉ်မှုနဲ့ခွဲခြားလို့မရတဲ့အမျိုးသားတွေအတွက်အထီးကျန်မှုတွေပြည့်နှက်နေတယ်။ စွဲလမ်းတဲ့အခါသူတို့ခံစားမိတဲ့အခါသူတို့ကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်မဟုတ်ဘဲအဲဒါကိုရှာတယ်
ငါဒီညစ်ညမ်းမှုနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ဒီစာရွက်ပေါ်မှာအရာအားလုံးဘယ်လိုရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့ငါတို့ကိုယ်ကိုကူညီနိုင်မယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကစွဲလမ်းမှုဖြစ်လာပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာတွေဖြစ်ရမယ်။
ကောင်းပြီ၊ ငါ၌ငါ့ပထမ ဦး ဆုံးရည်းစားရှိခဲ့သည့်တစ်နှစ်နှင့်တစ်နှစ်ခွဲအတွင်းပထမဆုံးသောနမ်းခြင်းဖြင့်သာငါသည်ငါ့အတွေးများ၏ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပြproblemနာရှိသည်ဟုထင်သောကြောင့်၊ လိင်အင်္ဂါအတွင်းရှိအီဘရာကူတစ်ကောင်ထက်ကျွန်ုပ်၏ panties ကိုစိုစွတ်စေသည်ဟုဆိုနိုင်သည်။ act ဒီမြင်ကွင်းရဲ့အနံ့ berguensa ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ဟေး။ အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီး ၁၂ လကျော်သွားပြီ။ အဲ့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့တစ်လကြာပြီးပြproblemနာကလိင်ဆက်ဆံခြင်းမှမဟုတ်တာ၊ ပြက်လုံးတွေသာဖြစ်တယ်၊ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့စကားပြောနေတာအတူတူပါပဲ၊ ငါအဲဒီအမျိုးသမီးနဲ့ပထမဆုံးအနမ်းကိုသုံးခဲ့ပြီးပြီ၊ အခုဆိုရင်ငါဟာမည်သည့်အမျိုးသမီးနဲ့မှစကားမပြောနိုင်တော့ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါ့မှာဖြစ်ပျက်မှု၊ ငါအထူးကုဆရာဝန်ဆီသွားပြီးသူကငါ့မှာဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောတယ် ငါဘာမှမရှိတဲ့အတွက်သူဘာမှလုပ်လို့မရဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး၊ စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်နေတယ်၊ ​​ငါဟာအလှဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ ငါ့မှာဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူး၊ အခုငါပြောတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့စကားမပြောနိုင်ဘူး။ ငါ့ကိုအကြောင်းငါ့ကိုခေါ်တယ် မင်းကိုကူညီနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဟယ်လို။! ငါခက်ခဲတဲ့အခြေအနေကနေဖြတ်သန်းသွားတယ် !! ငါအိမ်ထောင်ပြုခဲ့တာလေးနှစ်ရှိပြီ။ ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ကျွန်မယောက်ျားနဲ့ရင်းနှီးမှုသိပ်မရှိဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနဲ့တစ်ကိုယ်ရည်ရာဂစိတ်ဖြေတဲ့အရာတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါဘယ်လိုခံစားရလဲ ??? အင်တာနက်ပေါ်မှာ၊ ကေဘယ်လ်ပေါ်မှာမဟုတ်ဘဲ .. အချိန်တိုင်းဆွေးနွေးပြီးသူကကျွန်တော့်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာမကောင်းဘူးလို့ထင်တယ်။
သငျသညျစွဲအထူးကုနှင့်အတူကုထုံးကိုသွားနှင့်ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့အလိုတော်ပါဝါအများကြီးရှိသည်ဖို့ရှိသည်, မဟုတ်ရင်, ဒါကသင့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှု, စိတ်ထားနှင့်ကောင်းသောစေတနာကိုသတ်လိမ့်မယ်, သူကသူသည်သင်တို့ကိုသူကသာမန်ဖြစ်ကြောင်းသူကအမြဲတမ်းအပြစ်တင်ကြောင်းမပြော ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမပြုပြင်တော့တာဒါမှမဟုတ်ဂရုမစိုက်တာ၊ သူလုပ်တာကိုလုပ်တာ၊ လုပ်တာတွေလုပ်တာတွေမရှိတော့ဘူး။ ဒါကစွဲလမ်းသူကမယုံကြည်ဖို့ငြင်းဆန်တယ်၊ တကယ်တော့သူတို့ဟာပြitနာမရှိဘူးလို့ယုံကြည်ပြီးအမျိုးသမီးတွေရဲ့စွဲလမ်းမှုအတွက်အမြဲအပြစ်တင်ကြလိမ့်မယ်။ သတိထားပါ၊ အဲဒီလိုလူနဲ့အတူအချိန်နဲ့အားထုတ်မှုတွေဆုံးရှုံးရမယ်ဆိုရင်သင်ဟာ ၀ မ်းနည်းစရာကောင်းပြီးထိခိုက်နစ်နာစေနိုင်တဲ့သူဖြစ်နိုင်တယ်။ ဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲချင်ပါဘူး၊ သူလုပ်ချင်ရင်မင်းကအရမ်းပင်ပန်းသွားလိမ့်မယ်။ သူ့ကိုကူညီဖို့ကြိုးစားနေတယ်၊ ​​သူနေကောင်းနေချိန်မှာမင်းကအရမ်းဆိုးသွားမှာပါ။ ဒီလိုအတွေ့အကြုံနဲ့အတူကြာမြင့်စွာနေထိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့အတွေ့အကြုံကနေငါဟာ လူ
သူဟာငါ့ကိုချစ်တယ်၊ ငါ့ကိုနမ်းတယ်၊ ပွေ့ဖက်တယ်ဒါပေမယ့်ငါကပိုလိုအပ်တယ်၊ ငါကအစွမ်းမရှိဘူးလို့ခံစားရတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ joa၊ ကျွန်မလည်းအတူတူပါပဲ၊ ကျွန်မယောက်ျားကအဲဒါကိုကြည့်ပြီးသင်နဲ့တူတယ်။ ကျွန်မတို့မှာဆက်ဆံရေးမရှိပါဘူး။ သူကအဲဒီလိုခံစားတဲ့အခါသူကအဲဒီထဲကိုဝင်လာတယ်။ ငါတို့တိုးတက်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်လို့မထင်ဘူး၊ အဲဒီမှာပထမ ဦး ဆုံးသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုလိင်ဆက်ဆံဖို့တားမြစ်တယ်၊ ဒုတိယအပတ်မှာတစ်ရက်ကိုငါးမိနစ်လောက်တစ်နာရီစကားပြောပြီးနာရီဝက်လောက်စကားပြောခဲ့ကြတယ်၊ မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ သူ့ကိုအာရုံစိုက်ဖို့ခက်တယ် သူစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသောအရာအပေါ်သူအမြဲစိတ်စွဲလန်းနေသောကြောင့်ငါနှင့်အတူငါထိုတီထွင်မှုကိုမုန်းသည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းစွဲစွဲလမ်းမှုကိုနှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်ကြည့်နေခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်စွန့်ခွာလိုသည်။ ကျွန်ုပ်မကြည့်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများကိုကြည့်ခြင်းအားရပ်တန့်သည်အထိကျွန်ုပ်စောင့်ကြည့်နေပါသည်။ အကြောင်းအရာတစ်ခုလုံးစုဆောင်းထားတာပါ။ ငါ porn ကိုစွန့်ခွာချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့ဂရုစိုက်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေနေသည့် အချိန်မှစ၍ ကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုကိုပြင်းထန်သောစွဲလမ်းသူတစ် ဦး ဖြစ်ကြောင်းနှင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ဘဝအပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်ကြောင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကသိရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ငါနှစ်ပေါင်းများစွာခံစားခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ဒီအကြောင်းကိုငါပြောတယ်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုကြည့်ချင်တာနဲ့အရေးကြီးတဲ့အရာတွေကိုဘေးဖယ်ထားလိုက်တယ်။ လေ့လာမှုတွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေ၊ မိန်းကလေးတွေ၊ မိသားစုတွေ၊ ဒီဂိမ်းထဲကငါ့ကိုအများကြီးထိခိုက်စေခဲ့တယ် တစ်ခါတလေမနက်ခင်းမနက်အထိတစ်ခါတစ်ရံမှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုကြည့်ရတာခက်တယ်၊ ငါတက္ကသိုလ်မှာစာမေးပွဲဖြေဖို့လိုတယ်ဆိုတာသိပေမယ့်လည်းအခန်းထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိတ်ပြီးညစ်ညမ်းရုပ်မြင်သံကြားကြည့်တာကိုစတင်ခဲ့တာကြောင့်ငါဟာနေရာတကာကိုမသွားတော့ဘူး တစ်ယောက်တည်းအိမ်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုကြည့်တာနဲ့၊ အဲ့ဒီအတွက်အများကြီးမလုပ်တော့ဘူး၊ ဒါကကျွန်တော့်ကိုအရမ်းစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတယ်၊ ​​ကျွန်တော့်အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ်အထိကျွန်တော်နားလည်လာတာကသွားမယ့်သူတွေရဲ့အကြံပေးချင်တာ ဒါမှမဟုတ်ဒီစာမျက်နှာရှိကျွမ်းကျင်သူများကဤဆောင်းပါး၏ထုတ်ဝေမှုသည် ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှဖြစ်သည်ကိုငါမြင်သည်။ သို့သော်ဤခေါင်းစဉ်သည်အလွန်အရေးကြီးသည်ကိုသင်အမှန်တကယ်ယုံကြည်သည်၊ သင်သည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အရက်သေစာစွဲခြင်းကိုသာမကငါ၊ ဒီဟာကိုစဉ်းစားပါ ဒါဟာသိသိသာသာပြင်းထန်သောစွဲလမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးဘယ်သူမှသတိမပြုမိဘဲတခါတရံသင်ပင်ထိုအရာကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိကြပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တကယ်လိုအပ်ပါတယ်။ ငါပုံမှန်ကြည့်ရှုသောညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုပိတ်ဆို့ရန်နည်းလမ်းရှာနိုင်မနိုင်ဆိုတာကိုငါကြည့်ရှုမည်။ ၎င်းကိုကျော်လွှားရန်အခြားနည်းစနစ်များကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။
ငါချစ်ရာသခင်၊ ဆိုးသောအရာတို့၏သော့ကို၎င်း၊ သင်သတိပြုမိသည်ဖြစ်စေ၊ မကောင်းသည်ဖြစ်စေဒုစရိုက်အားလုံး၏သော့မှာနာခြင်း။ နာကျင်မှုပါဝင်သောအခါနာကျင်မှုမှအပျော်အပါးအထိအဆင့်တစ်ဆင့်သာလျှင်သင်ကိုယ်တိုင်နှင့်ဘဝကိုယ်နှိုက်၏ကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်သောအတွေးဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ဥပမာအားဖြင့်အရက်သမားသည်မစွမ်းနိုင်ခြင်းအတွက်ယူသည်။ သင်မျိုချရန်ခက်ခဲသောအရာတစ်ခုခုကို“ မျိုချ” ရန်၊ သင်သည်လိင်ဆိုင်ရာစိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုလျှင်သင်ကိုယ်တိုင်ကိုသင်စိတ်မကောင်းဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်သင်အမှန်တကယ်ဘဝမှထွက်ခွာရန်လိုအပ်သည့်သင်နေထိုင်သောဘဝကိုမကြိုက်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ , ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုသင့်ရဲ့မသိစိတ်တစ်ပိုင်း၌တည်ရှိ၏ !! သင်ပထမ ဦး ဆုံးလုပ်သင့်သည်မှာအမှားတစ်ခုခုလုပ် မိ၍ အပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုသည့်အခါတိုင်း "ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစွန့်လွှတ်ပါ" ဖြစ်သည်။ သင့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာလုပ်ပါ၊ သင့်ကိုနာကျင်စေသူ၊ မင်းကိုထိခိုက်စေသူ၊ ဘဝစသည်တို့ကိုခွင့်လွှတ်ပါ။ စိတ်ရှည်ခြင်း၊ စိတ်ရှည်ခြင်း၊ စိတ်ရှည်ခြင်း၊ ၀ မ်းမြောက်ခြင်းနှင့်၊ သင်၏ Self-ESTEEM သည်သင်ကိုယ်တိုင်တန်ဖိုးထားခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းကိုဂရုပြုပါ။ ထို့ကြောင့်ဖော်ထုတ်ခြင်းသည် SELF-ESTEEM သည်မညီမျှမှုနှင့်ဆိုးကျိုးများကိုကျော်လွှားရန်အတွက်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်၊ အဓိကအားဖြင့်ဝိညာဉ်ရေးရာစာအုပ်များလေ့လာရန်သင့်အားအကြံပေးသည်။ မှားယွင်းသောဘာသာတရားများ၊ ဘုရားမဲ့ဝါဒီများနှင့်မှားယွင်းသောသိပ္ပံပညာများသင်အမှန်တကယ်ပြောင်းလဲလိုပါက ၀ ိညာဉ်ရေးရာသည်ခွန်အားကြီးသောကြောင့်များစွာဆုတောင်းပါ၊ သင်သည်ခန္ဓာကိုယ်မဟုတ်၊ ဆန့်ကျင်ဘက်မဟုတ်ကြောင်း၊ သို့သော်သင်တစ် ဦး မှာသင်၏ယာဉ်ဖြစ်သည်၊ အခြားတစ် ဦး ကသင်၏စွမ်းအားဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ကိုသင်ထိန်းချုပ်မယ့်အစားဒုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်ကြီးစိုးဖို့အားလုံးဖြစ်နိုင်ခြေများနှင့်အခွင့်အလမ်းများ !! နှစ်နှင့်ချီ။ ကျွေးမွေးခဲ့သည့်ကဲ့သို့သောအားကြီးသောအရာတစ်ခုခုကိုလွှတ်လိုက်ခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်သော AUTOLASTIMA ထဲသို့မကျမိစေရန်သင်သည်ဤကဲ့သို့သောပုံစံမျိုးကိုကြည့်ခြင်းက ပို၍ ကောင်းသည်။ နှင့်ထိုအရာထဲသို့ကျခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ၊ အကယ်၍ သင်သာနိုင်ခဲ့လျှင်သင်ကိုယ်တိုင်မရှုမြင်ပါနှင့်သင်မမြင်နိုင်သည့်သင့်ကိုယ်သင်၏ရှုထောင့်ကိုမပိုင်ဆိုင်ထားပါနှင့် !! ဒုစရိုက်ကိုဖယ်ရှားရန်ခက်ခဲသော်လည်းမဖြစ်နိုင်ပါ၊ သင်ဤတွင်းထဲသို့ကျခဲ့သကဲ့သို့၎င်းမှထွက်ရန်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဖြစ်နိုင်ချေများနှင့်အခွင့်အလမ်းများသို့မချဉ်းကပ်ပါနှင့်။ သူတို့ကိုသုံးပါနှင့်အားလုံးလက်တွေ့လေ့ကျင့်။ သင်ကဘာလဲဆိုတာသိလိမ့်မယ်အစအ ဦး မှစတင်။ အရာအားလုံးသည်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ဖြစ်သည်၊ ဤအရာသည်သင်သည်များစွာသောအစာစားသောသူများကဲ့သို့ခုန်။ မရသည့်အပြင်ချက်ချင်းအစာစားခြင်းကိုရပ်တန့်စေခြင်းသို့မဟုတ်ချက်ချင်းရပ်တန့်လိုခြင်းအားဖြင့်မှော်အနေဖြင့်ပြုတ်ကျသွားခြင်းဖြစ်ပြီး ပို၍ ခက်ခဲသည်။ ! အကျင့်ယိုယွင်းမှုရှိပါစေ၊ သင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြည့်ရှုသည့်အရှိန်အဟုန်ကိုနှေးကွေးစေပြီးသင်သတိရစေသည့်အရာအားလုံးကိုချန်မထားပါနှင့်။ ကျင့်သုံးခြင်းကိုရပ်တန့်ပါ၊ သင့်ကိုယ်သင်အထင်ကြီးလေးစားမှုကိုတစ်ချိန်တည်းမှာကျင့်သုံးပါ။ ပထမ ဦး ဆုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုခွင့်လွှတ်ပါ။ နောက်တစ်ခါလဲပြန်လုပ်ပြီးပြန်စမယ်ဆိုရင်သင်ဟာအကျင့်ပျက်မှုကိုစွန့်လွှတ်မချင်းအကြိမ်ပေါင်းများစွာကိုယ့်ကိုယ်ကိုခွင့်လွှတ်ပါ။ ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်၊ မြင့်မြတ်သောသတ္တ ၀ ါကိုရှာဖွေပြီးသူ့ကိုစွန့်ခွာလိုက်ပါ။ သင် ၀ င်ရောက်လာသောအရာများကိုရပ်တန့်ရန်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာသူအားမေးမြန်းပါ။ သူသည်အရာရာကိုအပြည့်အဝသိရှိသူဖြစ်သည်။ ဖြစ်တည်မှုလွတ်မြောက်ခြင်း၏အမြင့်မြတ်ဆုံးနည်းစနစ်များရှိသောကြောင့်ခရစ်ယန်ဂိုဏ်းဂဏတွင်ပါ ၀ င်သောသခင်ယေရှု၏သွန်သင်ခြင်းများကိုကျွန်ုပ်အကြံပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၎င်းတို့သည်အရေးကြီးသောသော့ချက်များဖြစ်သည်။ သင်လက်ရှိတွင်နေထိုင်သည်၊ ၎င်းသည်သင်တိုးတက်လိုလျှင်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ အတိတ်အကြောင်းကိုစဉ်းစားခြင်းသည်စိတ်ဓာတ်အဆင့်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြိုကွဲပျက်စီးခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အတွက်သင်သည်သင်၏အာရုံစူးစိုက်မှုအားလုံးကိုဂရုမစိုက်ပါ။ လက်ဆောင် အနာဂတ်နှင့်အနာဂတ်အတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ သံသယများနှင့်အကြောက်လွန်ရောဂါများကိုပင်ဖြစ်ပေါ်စေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တစ်နေ့တာ၏ပြproblemsနာများသာလုံလောက်သည်ဟုသခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသောအခါဤသို့မိန့်တော်မူသည်။ နောက်တဖန်မရှိ ... လက်ရှိနေထိုင်ခြင်းသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ ငါဗုဒ္ဓဘာသာကိုလည်းအထူးအကြံပြုလိုတယ်။ အထူးသဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ရှစ်ဆမြောက်လေ့လာမှုကိုလေ့လာခြင်းဟာမိမိကိုယ်ကိုလွတ်မြောက်စေနိုင်ခြင်းအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်။ VITAELOGIA Y ZEN ၏ armando rekury စာအုပ်သုံးအုပ်။ hanuvah@hotmail.es PIRTARIA ကိုမဟုတ်ပေမယ့် ranacasona စာအုပ်ဆိုင်ကသာ cuernavaca မှာသူတို့ကိုရောင်းချသည်။ နှလုံးသားဆိုင်ရာ Alchemy ကဲ့သို့ el လိရှဗက် Clare ပရောဖက်၏စာအုပ်များကိုလေ့လာပါ။ သူမတွင်ကိုယ်ပိုင်ကူညီခြင်းနှင့်မြင့်မားသောဝိညာဉ်ရေးရာများရှိသည့်အလွန်ကောင်းသောစာအုပ်များရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အနှစ်သက်ဆုံးစကားပြောဆိုမှု၏သိပ္ပံနှင့်ခရမ်းရောင်မီးတောက်ကြီးဖြစ်သည်။ နည်းစနစ်များနှင့်အစအ ဦး ၌သင်တို့အားငါပြောခဲ့တာကငါ့ရဲ့ဒုစရိုက်ကိုစွန့်ပစ်လိုက်ခြင်းဟာမြန်ဆန်ပြီးနာကျင်မှုကင်းမဲ့ခြင်းပဲ၊ ဒါပေမယ့်ငါကအကူအညီတောင်းခံလိုက်တယ်။ ငါစွန့်ခွာချင်တယ်ငါထွက်ခွာ !!! ငါကြိုးစားပြီးငါကြိုးစားချင်ခဲ့တယ်၊ အမှားတွေလုပ်မိရင်သူတို့ကိုဘက်မလိုက်ဘဲပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအမှားတွေလုပ်မိရင်ငါထွက်လာတဲ့အထိအဲဒီနည်းအတိုင်းပဲဆက်ထားခဲ့တယ်။ ကောင်းပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်၏ခေါင်းမာမာနှင့်မာနကိုစွန့်ခွာပြီး KRRISNA၊ ယေရှု၊ ဗုဒ္ဓနှင့်မာကုနှင့် AND လိရှဗက်ကလာ့စ်အစရှိသည့်သွန်သင်ချက်များနှင့်အခြားအရာများအားစွန့်လွှတ်ခဲ့သည်။ ငါတို့နှင့်မည်သည့်နေရာသို့ရောက်နေသနည်း၊ ၎င်းကိုယုံကြည်ပြီးအထူးသဖြင့်အသက်တာ၏ရင်းမြစ်ဖြစ်သောမြင့်မြတ်သောသတ္တဝါကိုယုံကြည်ကိုးစားပါ။ သင်၏ဥမှထွက်ရန်ဥာဏ်ပညာနှင့်ခွန်အားနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုတောင်းပါ။ ခင်ဗျားခေါင်းမာပြီးကျဉ်းမြောင်းတဲ့သူမဟုတ်ရင် ... ဒီကိစ္စက ... မင်းမဟုတ်ထွက်မထွက်ချင်ဘူးလား။ ဘုရားသခင်သာလျှင်သင့်ကိုကူညီပါ။ ဒုသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့်စိတ်ရောဂါရောဂါကိုကောင်းကောင်းနှုတ်ခွန်းဆက်သည်။ ကျွန်ုပ်သိသည်။ သို့သော်၎င်းသည်သင်ထွက်ရန်နှင့်ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားလျှင်ဘယ်တော့မှထပ်မံကျနိုင်တော့မည်မဟုတ်ကြောင်းယုံကြည်မှုရှိရန်ကူညီလိမ့်မည်။ .. ကောင်းပြီ၊ ဤအရာအားလုံးသည်သင့်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်သိကျွမ်းစေသည် မင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိပြီ !! သင့်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်အခွင့်အလမ်းများနှင့်သင့်ရဲ့မဟာမြင့်မြတ်မှုသည်ကြည့်ရှုရန်သင့်အားတည်ရှိနေသောလူသားအားလုံးကိုပြန်လည်ရေတွက်ခြင်းနှင့်တိရိစ္ဆာန်များရဲ့အကျင့်ဓလေ့များကိုဆက်လက်ကျင့်သုံးနေရန် ... အပြောင်းအလဲဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ပါ။ ပြင်ပကနေအတွင်းပိုင်းအထိ ... မင်းရဲ့သက်တမ်းတိုးခြင်းအားဖြင့်မင်းကိုပြောင်းလဲစေပါတယ် ... ဒီနည်းနဲ့ငါသူတို့ကိုဒီလောက်များများပေးခဲ့ပြီ ... ဖွင့်လှစ်ခြင်း !!! (ဖြစ်နိုင်ခြေများနှင့်အခွင့်အလမ်းများကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်း) အဖြေကိုလူသားနှင့်သူ၏သိပ္ပံပညာကသာရှာဖွေတွေ့ရှိသည်။ ၎င်းသည်ဖြစ်တည်ခြင်းနှင့်စကြဝuniverseာသို့မဟုတ်စကြဝosာ၏အမှောင်ထုတွင်းနက်ဝှေ့တွင်မလှုပ်ရှားနိုင်သည့်ကလေးငယ်လေးနှင့်တူသည်! မင်္ဂလာပါ။ သူတို့အကြံပေးတယ်။ အကြံဥာဏ် - ဒီနည်းလမ်းကို (သို့) ဘဝကကမ်းလှမ်းတဲ့အခြားအရာတွေကိုဝေဖန်၊ စီရင်ဆုံးဖြတ်၊ ပြစ်တင်ရှုတ်ချမယ်ဆိုရင်မင်းဟာရှုံးနိမ့်မှုကြောင့်ကြိုတင်ကြံစည်မှုမရှိဘူးလို့ပဲ။ .. ဒါကြောင့်သတိထားပါ။ နုံမနေပါနဲ့။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အခုချက်ချင်းသယ်ဆောင်သွားပါ။ သင့်ရဲ့စိတ်ပျက်အားငယ်မှု၊ နိုးထမှုနှင့်နာကျင်မှုအတွက်သင့်ကိုအလွဲသုံးစားပြုပါ။ သူတို့ယုံကြည်ခြင်းကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရဘယ်မှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နုံ! အခက်အခဲအကောင်းဆုံးနှင့်အများဆုံးလက်တွေ့ကျတဲ့နှင့် FUNCIONAL ။ ကြိုးစားအားထုတ်မှုမရှိသော်လည်းဖြစ်နိုင်သည် ....
မင်းရဲ့ဆောင်းပါးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ ZAGROS ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အဲဒါကငါတကယ်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာမှတ်မိဖို့ကူညီပေးတယ်၊ ငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ပါ။ ဒါကဘယ်လောက်ကုန်ကျတယ်ဆိုတာကိုပါ။ ဒီပစ္စုပ္ပန်မှာနေဖို့၊ ငါဘာမှမအားမကိုးဘူး။ စာအုပ်အတွက်မင်းကိုရေးမယ်။ , ကျေးဇူးတင်ပါသည်
ကျွန်ုပ်၏ခင်ပွန်းဖြစ်သူနှင့်သူ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေပြwithနာများအတွက်အရေးတကြီးအကူအညီလိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏သမီး ၃ ယောက်ကိုကျွန်ုပ်ကြောက်သည်။
ပါပလော Baleani ဟုသူကပြောသည်
Eucharistic Adoration ၏တစ်ပတ်လျှင်တစ်နာရီလုပ်ပါ, 1996 နှင့် 2016 အကြား, ငါကကင်လုပ်ခိုင်းကိုငါမြင်, ငါ 28 နှစ်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြ, ငါကအမြဲတမ်းစွန့်ခွာချင်ခဲ့တယ်ငါမတတျနိုငျသ။ ငါကခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှာဆုတောင်းစပြုကတည်းက။ ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းသာကျွန်ုပ်အပေါ်လွှမ်းမိုးနိုင်ပြီးညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၊ ယုံကြည်ခြင်းရှိခြင်း၊ ကောင်းသောသူနှင့်သင့်ကိုကူညီပေးသောမိန်းကလေးတစ် ဦး ကိုရှာဖွေခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။
ရုပ်မြင်သံကြားကိုမကြည့်ပါနှင့် (ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများ၊ သို့မဟုတ်အဝတ်အချည်းစည်းမြင်ကွင်းများရှိသူများ) ။ ထူးခြားသောဇာတ်လမ်းများကိုမဖတ်ပါနှင့်သို့မဟုတ်နားထောင်ခြင်း၊
သင်ဟာဘုရားသခင့်ပုံသဏ္ဌာန်တော်နှင့်အညီဖန်ဆင်းခံရတဲ့လူသားတစ် ဦး ဖြစ်တယ်။ စာနယ်ဇင်းသမား၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ ဆရာဝန်စတဲ့အလုပ်မျိုးစတဲ့ဂုဏ်ယူစရာအရာတွေအများကြီးရှိတယ်။
သမ္မာကျမ်းစာကိုမဖတ်ပါနှင့်။ နေ့တိုင်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ရောက်ပါ။ ဤအကြောင်းကိုဘုန်းတော်ကြီးများနှင့်စကားပြောပါ။ ၀ န်ခံပါ။ ကျေးဇူးတော်၌ပါ ၀ င်ပါ။ ခရစ်တော်နှင့်ပိုမိုနီးကပ်ရန်သင်၏ ၀ မ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ လူတစ် ဦး အနေနှင့်သင့်ကိုကူညီသည့်၊ သင့်ကိုဖျော်ဖြေရန်နှင့်ရုပ်ဆိုးသောသို့မဟုတ်မကောင်းသောအရာမှသင့်ကိုဖယ်ရှားပေးသည့်စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာများကိုစိတ်ကူးဖြစ်စေသောစာအုပ်များကိုဖတ်ပါ။
အားကစားကိုကြည့်ပါ၊ အားကစားကိုကြည့်ပါ၊ အားကစားအကြောင်းကိုဖတ်ပါ၊ ၎င်းသည်သင်အလွန်အကျွံမနေသရွေ့ကျန်းမာရေးနှင့်အလှဆုံးဖြစ်သည်။
Pablo Baleani အားပြန်ပြောပါ
အမည်ဝှက်ပြီး၊ မင်းကဒီအရာအားလုံးကိုကျော်လွှားပြီးပြီ၊ ငါဟာတူညီတဲ့အသက်အရွယ်နီးပါးပဲ၊ ငါအဲဒီမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့သွားမယ် ... ကောင်းချီးများနှင့်အားပေးမှုများစွာ ..
ငါသည်လည်းဤအပြာစာပေရုပ်ပုံများတွင်အချိန်ကြာမြင့်စွာပါဝင်ခဲ့သည်။ မင်းထက်စာရင်စာမျက်နှာများပိုသိနိုင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏အစွမ်းခွန်အားနှင့်ဘယ်သောအခါမျှမပြောင်းလဲနိုင်သောအရာတစ်ခုကိုပြောပြပါရစေ။ ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်ဘဝကိုတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်းမတိုင်မီကျွန်ုပ်သည်အမြဲစိတ်ပျက်။ စိတ်ဓာတ်ကျခဲ့သည်။ ခရစ်တော်ဖြစ်သည်၊ အရူးတစ် ဦး တည်းသာထွက်ပေါက်ဖြစ်သည်
ပိတ်ဆို့ခြင်းသည်သင့်အတွက်အသုံးဝင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်ခံစားရသည်နှင့်တပြိုင်နက်သူတို့ကိုသင်သော့ဖွင့်ပါလိမ့်မည်၊ ကျွန်ုပ်သည်အတွေ့အကြုံမှသိသည်၊ ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီဖြစ်သောကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုများစွာရှိခဲ့သော်လည်းသူမသိသေးပါ၊ ငါ့ကိုငြင်းပယ်ခြင်းဖြင့်မသိဘဲငါ့ကိုနာကျင်စေသည် ၈ လခန့်ကုထုံးဖြင့်ကုသမှုကြောင့်သူသည် ၂ လသာတက်ရောက်ခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်တိုးတက်မှုမှမတွေ့ပါ၊ သူမြင်နိုင်ရန်ပင်တည်ရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်မြင်သည် ငါသတိထားမိပြီး၊ အစွမ်းမရှိဘူးလို့ခံစားရတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စွဲလမ်းမှုကငါတို့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့အဆုံးသတ်တော့မယ်ဆိုတာကိုငါသိတယ်။ သူဟာ ၆ နှစ်ကြာတိုက်ခိုက်နေပြီးသူဟာပြီးခဲ့တဲ့အနှစ် ၂၀ ကျော်ကတည်းကသူ့ရဲ့စွဲလမ်းမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်။ အဲဒါကိုစွန့်လွှတ်လိုက်ရင်နှစ်ဖက်စလုံးအတွက်နာကျင်ပေမဲ့သင်ကပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ရမယ်။ အဲဒါကခက်ခဲလိမ့်မယ်။ ငါသူနဲ့ရှိနေကတည်းကသူ့ကိုရူးသွပ်စွာချစ်မြတ်နိုးပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုပျောက်သွားတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ငယ်ငယ်ကတည်းကခံစားခဲ့ရပြီးထိုစာမျက်နှာများကသူ့အားအသက်ပေးခဲ့သဖြင့်ကျွန်ုပ်ဘာမျှတန်ဖိုးမရှိခဲ့ပါ
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုသည်ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်ခက်ခဲသည်၊ အချို့သောပစ္စည်းများကိုလည်းစွဲလမ်းရန်ခက်ခဲသည်။ အကြိမ်ပေါင်းများစွာကြုံတွေ့ရသည်က၎င်းသည်တင်းမာမှုအချို့သို့မဟုတ်သက်သာရာရခြင်းကဲ့သို့သောနေရာများနှင့်နီးလေလေ၊ ရုပ်ပုံများ၊ လူများ၊ အခြေအနေများစသည်ဖြင့်သင်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ခြင်းအားအဆုံးသတ်စေသည့်အခြေအနေကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်၊ ပြန်လည်သက်ရောက်ရန်လွယ်ကူသည်။ လွယ်ကူသောအရာမဟုတ်သော်လည်းမဖြစ်နိုင်သည့်အရာမရှိပါ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်တာကိုအဆုံးသတ်စေတယ်၊ ​​လမ်းလျှောက်ထွက်တာ၊ ရုပ်ရှင်သွားတာ၊ ညစာစားတာစတာတွေလိုစိတ်ကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလုပ်နိုင်တယ်။
verena mr ဟုသူကပြောသည်
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်လူကိုလုံးဝဖျက်ဆီးပစ်သည့်ရောဂါဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်၊ စိတ်နှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုပျက်စီးစေသည်၊ ဘုရားသခင်ရှေ့မှောက်တွင်၎င်းသည်ရွံရှာဖွယ်ရာဖြစ်သည်
verena mr မှစာပြန်ရန်
လူအတော်များများအတွက်တော့မကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ကလူတစ် ဦး စီကသူတို့မြင်ချင်တာကိုဆုံးဖြတ်ပြီးလူတွေကိုတားမြစ်မထားသင့်ဘူးလို့တစ်ချိန်ကပြောခဲ့ဖူးတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒါကတခြားသူတွေရဲ့စည်းမျဉ်းတွေကိုချိုးဖောက်တာကိုပဲပိုပြီးကောင်းအောင်မြင်စေတယ်။
ဒါတောင်မှ၊ ဒီလောကရှိအရာအားလုံးလိုပဲပိုလျှံနေတဲ့လူတိုင်းအတွက်နည်းနည်းဆိုးတာပေါ့ ...
အမည်ဝှက်ဖြင့်ပထမ ဦး စွာစာမျက်နှာများကိုမပိတ်ပါနှင့်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ဆိုးရွားသော်လည်းအခြားတစ်ဖက်တွင်ထားခဲ့ခြင်းသည်ပိုကောင်းသည်၊
သင့်ကိုအဖြေပေးမည့်ကျွမ်းကျင်သူများထံမှအကူအညီတောင်းရန်ပိုကောင်းသည်၊ သို့မဟုတ်သင်ဤအရာများကိုသိသူတစ် ဦး ဦး ကိုမသိလျှင်မိတ်ဆွေနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး မှတစ်ဆင့်သူ့ကိုမည်သည့်နေရာတွင်ဆက်သွယ်ရမည်ကိုပြောပြလိမ့်မည်။
Ariel၊ မင်းထင်တာကမင်းဟာမင်းကိုအလွယ်တကူစိတ်လှုပ်ရှားစေနိုင်ပြီးအဲဒါကငါ့ဘ ၀ မှာတွေ့မြင်ခဲ့ဖူးသမျှနဲ့မတူတဲ့ပြproblemနာတစ်ခုပဲလို့ငါထင်တယ်။
မင်္ဂလာပါပထမ ဦး စွာ Lorenzo ၏အလွန်ကောင်းသောစိတ်ကူး (သို့) တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၊ ရုပ်ထုပုံများနှင့်ငါ့ကိုထိခိုက်စေသည့်အခြားအရာများအားစွဲလမ်းနေသူအချို့အတွက်ဤသတင်းအချက်အလက်ကိုဖွင့်ရန်အစပြုသည်။ သို့သော်၎င်းသည်မည်မျှအန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ သင်ပြောသည့်အရာသည်မှန်ကန်သည်၊ သင်ပြောပြသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်ရောဂါမကြီးထွားမီ၊ သင်၏အကူအညီ၊ မိတ်ဆွေ၊ ကျွန်ုပ်အားသင့်အားကြိုတင်ကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်။ ငါကငါးနှစ်တာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကပျော်ရွှင်မှုနဲ့တူတဲ့အရာတစ်ခုလို့ခံစားခဲ့ရတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါစိတ်ဓာတ်မကျမချင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးနေတယ်၊ ​​ငါမောပန်းနေပြီ၊ ဒါပေမယ့်မင်းကိုကူညီပေးချင်တယ်၊ ငါအခုအချိန်မှာကျရှုံးလိမ့်မယ်နဲ့တူငါခံစားရတယ်။
ငါပြောခဲ့သလိုငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာငါးနှစ်ရှိပြီ၊ ၁၅ နှစ်အရွယ်မှာစခဲ့တယ်၊ အတန်းဖော်အုပ်စုတစ်စုကအဝတ်အစားအချည်းစည်းအမျိုးသမီးတွေပေါ်လာတဲ့ကဒ်ဂိမ်းကိုကြည့်နေရင်းကျောင်းမှာအတန်းဖော်တစ်ယောက်ကကျွန်တော့်ကိုမှတ်ချက်ချတယ်။ သူမ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုစတင်ထိတွေ့ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်မည်မျှမသိသော်လည်းစိတ်လှုပ်ရှားမှုသည်ကျွန်ုပ်အပေါ်လွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့သည်ထင်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ရေချိုးခန်းအတွင်းရှိနေစဉ်နှင့်ကျွန်ုပ်ကိုထိမိသောအခါအဖြူရောင်အရည်ထွက်လာပြီးတစ်ခါမျှမမြင်ဖူးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်အံ့သြသွားသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေဒါမှမဟုတ်ဒီ manuela ဆိုတာဘယ်လိုလဲ၊ ဘယ်လိုဖြစ်လဲ၊ ဒါပေမယ့်အဲဒီမှာငါအဲဒီနေ့မှစပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုစတင်ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်။ တစ်နေ့မှာ ၃ ကြိမ်ကနေ ၅ ကြိမ်လောက်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခဲ့တယ်၊ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကန့်သတ်ရန်ကြိုးစားသော်လည်းကျွန်ုပ်မတိုးတက်ပါဟုကျွန်ုပ်ခံစားမိသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏အကူအညီကိုလိုရန်လိုသည်။ Lorenzo 'နှစ်သက်သည်မှာကျွန်ုပ်အတွက် ၁၅ နှစ်မှယနေ့အသက် ၂၁ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော seto သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်အပူတပြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်ကိုကူညီပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်တဲ့သူတွေကိုထောင်ချသင့်တယ်ထင်တယ်၊ အထူးသဖြင့်သူတို့ကစွဲလမ်းသူတွေ၊ မိသားစုတွေရှိရင်၊ ဒုတိယနဲ့တတိယပါတီတွေအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အိမ်များအတွင်း၌ပင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အထူးသဖြင့်ကလေးများကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်
homero del ကောင်းကင်တမန် ဟုသူကပြောသည်
စွဲလမ်းမှုမှခံစားနေရသူများကိုအထောက်အကူပြုသောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုတန်ဖိုးထားသည်။ ၎င်းသည်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ဆက်နွှယ်ပါကတန်ဖိုးရှိသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ဇနီးမောင်နှံနှစ် ဦး စလုံးနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုပျက်စီးစေသည်ဟုအခိုင်အမာပြောဆိုရန်အရေးကြီးသည်။
homero del angel သို့ပြန်သွားရန်
jhon Carlos ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်ညီအစ်ကိုများကအကြိမ်ကြိမ်အဓမ္မပြုကျင့်ခံခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကိုစွဲလမ်းသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကလေးသူငယ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းကိုရပ်တန့်မသွားပါ။ ကျွန်ုပ်သည်အရွယ်မရောက်သေးသူကိုလည်းအဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့သည့်နေ့၊ ငါကြည့်တဲ့အခါလိင်တူချစ်သူစိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ဖူးပေမဲ့ငါအရမ်းကြည့်ကောင်းတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာတွေကြည့်တာကိုငါနှစ်သက်တယ်။ နောင်အနာဂတ်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ပိုမိုဆိုးရွားလာပြီး၊ ကျွန်ုပ်ကြိုးစားနေသည့်အရွယ်မရောက်သေးသူကိုမုဒိမ်းကျင့်ပြီးသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်၏တူမများကိုထိခိုက်နိုင်လိမ့်မည်ကိုစိုးရိမ်သည်။ ၎င်းသည်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ခံရပြီးနောက်ရက်စက်စွာထိုးဖောက်ခံခဲ့ရသည်၊ ထိုသူအားလူတစ် ဦး အားထိခိုက်စေသည့်အချက်ကိုကျွန်ုပ်ပိုမိုခံစားမိသည်။ ; သူမကိုအဓမ္မပြုကျင့်ဖို့ငါ pono မှာတွေ့ရတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုသတိရမိတယ်။ ငါသည်လည်းသူမနှင့်တူသောမိန်းကလေးတစ် ဦး ၏ပုံရိပ်များကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည်။
jhon carlos အားစာပြန်ပါ
shit and shit ကလေးသူငယ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာကြည့်ခြင်း၊ zoophilia၊ ဘိန်းဖြူနှင့်ဘာသာရေးအစွန်းရောက်ဝါဒတို့သည်မကောင်းသောအရာမဟုတ်ပါ။ (သူတို့နှင့်တိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်အဆက်အသွယ်မရှိသလောက်) ညစ်ညမ်းသည်မဆိုးဟုထင်သူများရှိသော်လည်းစူပါကိုသူတို့သတိပြုမိကြသည်။ လွယ်လွယ်ကူကူရောင်းရန်ရှိသောပစ္စည်းများစွာနောက်ကွယ်ရှိကြောင်းမာဖီးယားဂိုဏ်းများ၊ လစဉ်လုပ်ကြံခံရသူမည်မျှရှိသည်ကိုသင်သိပါသလား။ လူ့ ဦး နှောက်သည်ထင်သည်ထက် ပို၍ ဆက်စပ်မှုရှိသည်၊ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောလှုံ့ဆော်မှုအားလုံးတွင်လုပ်ဆောင်မှုအစီအစဉ်တစ်ခုပါဝင်သည်၊ ကလေးငယ်၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည်၎င်းကိုနှစ်သက်ပါကကျွန်ုပ်တို့နှင့်လိင်ဆက်ဆံလိုသည့်လုပ်ဆောင်မှုအစီအစဉ်ကိုထုတ်လုပ်သည်။ အိမ်နီးချင်းရဲ့ ၁၀ နှစ်အရွယ်သမီးကလား သင်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောအရာတစ်ခုကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာမြင်သောအခါဤနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောလုပ်ရပ်ကိုလက်ခံခြင်းသည်အဆုံးသတ်ဖြစ်လာသည်ကိုသင်သိပါသလား။ သင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်ခုခုလုပ်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းကိုအလေ့အထတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီး၎င်းအလေ့အထကိုမိမိကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးခြင်းဖြစ်သည်ဆိုပါကအကျင့်ဟုခေါ်သည်ကိုသင်သိပါသလား။
Carfer ပေါ့ ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီ၊ ကောင်းပြီ၊ မကြည့်ချင်ဘူး၊ ငါမကြည့်ချင်ဘူး၊ မင်းကရအောင်ကြိုးစားနေတယ်။ မင်းဟာရန်သူကိုသိဖို့လိုတယ်။
အမှန်အတိုင်းပြောရရင်ဒီဟာတွေအားလုံးမှာငါပါဝင်ပတ်သက်တယ်လို့ငါထင်တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်လိုလွတ်မြောက်အောင်လုပ်မလဲဆိုတာမသိဘူး။ xD ငါအသက်ကြီးပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည် ၃၄ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးသူ့ကိုမြင်ကွင်းများကြည့်ရှုရန်ပေးသည်။ ငါအရမ်းကြောက်တယ်၊ ပိုဆိုးတာကတစ်ခုခုပိုဆိုးတယ်၊ ငါမြင်တာကိုကြိုက်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ငါတွေ့တဲ့အခါငါမမြင်နိုင်ဘူး၊ မမြင်ရဘူး၊ အားကောင်းတယ်၊ မင်းလုပ်နိုင်မယ် 'လို့ငါပြောတော့ငါစိတ်မကောင်းပါဘူးဒါပေမယ့်ငါဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူး ငါလုပ်တယ် .......... အဲဒါ helpsaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
မင်္ဂလာပါညီအစ်ကိုများ၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုမရှိသူများကိုကျွန်ုပ်တို့မဆုံးဖြတ်ပါစေနှင့်။ ငါဟာစွဲလမ်းသူတစ်ယောက်မဟုတ်ပေမယ့်အဲ့ဒီအစွန်းရောက်မှုကိုရောက်လုနီးပြီ။ လူ့စိတ်ကိုဖန်တီးပေးတဲ့အဆုံးမဲ့စွဲလမ်းမှုတွေ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြည့်ဝစုံလင်သူများမဟုတ်ကြောင်းနှင့်ဘုရားသခင်သည်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုပေးခဲ့သည်ကိုသတိရပါ။ သို့သော်ရဲဘော်ရဲဘက် Zagros ပြောသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်စိနှင့်စိတ်များကိုအာရုံစိုက်ရန်ခိုင်မာသောအုတ်မြစ်များမရှိပါကကျွန်ုပ်တို့ကျလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်မရှိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည် hard drive ရှိသောစက်ရုပ်များနှင့်တူသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သွားရမည့်လမ်းရှိသော်လည်းဘုရားသခင်မရှိလျှင်လမ်းမရှိကြောင်းသတိရပါ။ ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး တည်းအတွက်အပြာစာပေများကိုရှောင်ရန် ပို၍ ခက်ခဲသည်။ ဘုရားသခင်၏အကူအညီဖြင့်သင်၏အလိုတော်သာလျှင်ပြတင်းပေါက်များကိုဖွင့်လိမ့်မည်။ အလိုဆန္ဒနှင့်အတူမင်းသမီးကိုကြည့်ပါ။ (မင်းသိတယ်ဆိုပါစို့) ပို။ ပင်။ သင်သည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုချစ်သည့်အခါအပြစ်ရှိသည်ဟူသောခံစားချက်ရှိသည်။ တကယ်တော့သင်ကိုယ်တိုင်နှင့်ဘုရားသခင်နှင့်သာပြောင်းလဲမှုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
၎င်းသည်လူမှုရေးမကောင်းသောအရာဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားနေသော်လည်း၎င်းကိုတီဗွီ၊ ကြော်ငြာများ၊ တေးဂီတနှင့်အင်တာနက်တို့တွင်ရှင်းလင်းစွာမြှင့်တင်ထားသည်။
၁- ဘုရားသခင်ထံအကူအညီတောင်းခံပါ (ကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာထက် ကျော်လွန်၍ ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသော၊ ငါတို့ကို သိ၍ ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီနိုင်သောအမြင့်ဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးရှိသည်။ )
၂- ၎င်းကိုစွန့်ခွာရန်ခိုင်မာသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာကိုမဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာကိုတွယ်ကပ်နေတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ချင်တယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့ကတကယ့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးအလုပ်များ၊ လေ့လာမှုများ၊ သူငယ်ချင်းများ၊ မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်သည်စွဲလမ်းသူ၊ မုဒိမ်းကျင့်သူ၊ ပြိုကွဲသွားတဲ့အိမ်ထောင်ရေးကိုဘယ်သူမှမဖန်တီးနိုင်ကြဘူး။
၃။ သူငယ်ချင်းများကိုအားကိုးရန်အရေးကြီးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြproblemနာကိုစိတ်ဝင်စားသောမိတ်ဆွေစစ်များကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်ပါသည်။ သူငယ်ချင်းများကိုရှာရန်မလွယ်ကူပါ။ သင်ရှာဖွေသည့်အခါ၌ပင်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပြasနာကိုဝေမျှရန်အလွန်ခက်ခဲနိုင်သည်။ သူတို့သည်သင့်အားအမြဲတမ်းအဖြေပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ဤကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်၎င်းတို့အားစိတ်ဓာတ်ကျစေသည်ဟုခံစားရသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏စွဲလမ်းစေသောအလေ့အကျင့်ကိုစွန့်လွှတ်ရန်ခိုင်မာသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်၌ရှေ့သို့ချီတက်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
သင်၌ဤအရာကိုမျှဝေရန်သင့်တွင်သူငယ်ချင်းမရှိပါကသင်ကထောက်ခံမှုကိုရှာတွေ့နိုင်သည့်နေရာသည်ချာ့ချ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းတို့သည်အများအားဖြင့်ဆုံးဖြတ်ချက်အချဆုံးဖြစ်သော်လည်းဤကိစ္စသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ဤကိစ္စကိုအလေးအနက်ထားပါလိမ့်မည်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုရိုးရာဓလေ့မရှိသောဘုရားရှိခိုးကျောင်းတစ်ခုကိုရှာဖွေပါ။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအတွေ့အကြုံအပေါ် အခြေခံ၍ ဤအချက်ကိုကျွန်ုပ်မှတ်ချက်ပေးသည်၊ ၎င်းသည်အလွန်ဘာသာရေးအသံဖြစ်သော်လည်း၎င်းကိုဘာသာရေးမဟုတ်သူများအတွက်အသုံးချနိုင်သည်။
Willpower သည်မည်သည့်အားကစားကိုမဆိုယှဉ်ပြိုင်ခြင်းနှင့်တူသည်။ ရှုံးနိမ့်သော်လည်းအရှုံးမပေးပါနှင့်၊ ငါ porn ကြည့်ချင်သောနောက်ထပ်တစ်မျိုးစဉ်းစားပါ၊ နှင့်မစ္စတာကသူ့လက်ကိုမလွှတ်ပါစေနဲ့
ခင်ဗျားခင်ပွန်းသည်ကသူတို့လိင်ဆက်ဆံစဉ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်တာ၊ ပုံမှန်ကြည့်တာ၊ နှစ်နဲ့ချီပြီးပြproblemsနာတွေကြုံခဲ့ရတယ်၊ နေ့မှစ၍ နုတ်ထွက်ဖို့ငါတိုက်တွန်းတယ်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကကျွန်တော့်ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ပေးတယ်။ ငါ porn နှင့်ဆက်စပ်သောဘာမှမကြည့်ဘဲကြာမြင့်စွာသွားနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းကိုကျွန်ုပ်ကြည့်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်အတွင်းမှတစ်ခုခုကသူမကိုပြုလုပ်ရန်အတင်းအကျပ်ပြုသည်၊ ၎င်းကိုမကြည့်ခင်နှင့်ကြည့်ပြီးနောက်ကိုယ်ထိလက်ရောက်ကျကျခံစားမိသည်၊ ကျွန်ုပ်စိတ်ပျက်လက်ပျက်၊ -esteem ကိုလျှော့ချလိုက်သည်။ စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသောနည်းဖြင့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်ကြုံတွေ့ရပြီး၊ ကျွန်ုပ်တွေ့မြင်ရသည့်အခါကျွန်ုပ်သည်အမြဲတမ်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနေပြီးစိတ်ကျေနပ်မှုရရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်မကျေနပ်မှုရှိသည်။ အော်ရီဂျင်နှင့်အခြားအရာများအကြောင်းစဉ်းစားရန်ကျွန်ုပ်ကိုနှောင့်ယှက်သည်။ ၎င်းနှင့်အတူကျွန်ုပ်၌ပြproblemနာမရှိချေ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကိုငါမမြင်ရသေးပေမဲ့အဲ့ဒီပုံတွေကိုကျွန်မရဲ့စိတ်ကိုရှုပ်ထွေးစေခဲ့တယ်။ အဝတ်အချည်းစည်းရှိတဲ့မိန်းမတွေနဲ့တွေ့ဖို့အရမ်းစိတ်ဝင်စားတယ်၊ အမျိုးသမီးများ။ ကျွန်ုပ်သည်လက်ရှိလက်ထပ်ထားသူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဇနီးမှfemတ္တပ္ပစိတ်ပိုမိုမြင်သာမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ နူးညံ့သိမ်မွေ့မှုသည်သူမ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်အနည်းငယ် ပို၍ ကာမဂုဏ်ခံစားခြင်းဖြစ်သော်လည်းသူမတွင်ငွေသို့မဟုတ်အချိန်အတွက်အဆင်သင့်သို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်၊ မိမိကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ရန်နှင့်အမြဲတမ်းအသုံးပြုရန်အတွက်ဆင်ခြေပေးသည်။ ငါသွားရာလမ်း၌ဖြောင့်မတ်၏။ ကျွန်မရဲ့ပြproblemနာအကြောင်းကိုသူမပြောပြခဲ့သည်။ သူမပထမဆုံးလုပ်ခဲ့တာကငိုပြီးဒေါသထွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့နောက်သူမကကျွန်မကိုကူညီရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်၊ တစ်လကြာသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ခရစ်ယာန်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးအမှန်တရားမှာဘာသာတရားနှင့်မဟုတ်ဘဲအခြားနည်းလမ်းဖြင့်ဤဒုစရိုက်ကိုစွန့်လွှတ်ရန်အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုကိုရှာဖွေလိုပါသည်။
ယုံကြည်စိတ်ချမှုဖြင့်စကားပြောခွင့်ရသူ မှလွဲ၍ မည်သည့်အရာကမျှကျွန်ုပ်ကိုမကူညီနိုင်ပါ။ ခရစ်ယာန်တစ် ဦး ဖြစ်သော်လည်းဘာသာတရားများကသင့်ကိုကူညီရန်ကြိုးစားသော်လည်း၊ သူတို့သည်သင့်ကိုစစ်ကြောစီရင်ဆဲဖြစ်သည်။ သင်လမ်းလျှောက်နိုင်သည့်အန္တရာယ်နှင့်ခွင့်လွှတ်မှုရရှိပါကအချို့သူများအတွက်တစ်ခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည်။
ငါငါ့အလုပ်ကိုအချိန်ဖြုန်းနေတယ်၊ ​​အလုပ်လုပ်တယ်၊ အလုပ်လုပ်တယ်၊ အိမ်မှာငါ့ဇနီးနဲ့ငါ့ရဲ့ရန်ဖြစ်တာကိုနားထောင်တယ်၊ သူကအမြဲတမ်းရုပ်ဆိုးပြီးအသည်းအသန်ကြည့်နေတယ်၊ ​​သူကအရုပ်ဆိုးတာမဟုတ်ဘူး၊ သူမသည်ဂရုမစိုက်နိုင်လောက်အောင်သေးငယ်ပြီးအချိန်ပိုရှိသည်။ သို့သော်သူသည်မသန်မစွမ်းသူအမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဇနီးအပေါ်ကျွန်ုပ်ခံစားရသောစိတ်ဝင်စားမှုနည်းသည့်အဝတ်အချည်းစည်းအမျိုးသမီးများကိုမြင်တွေ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့်ငါစစ်တပ်ရောက်တော့ပထမဆုံးအမှားလုပ်မိတယ်။ အဲဒီမှာပထမဆုံးအကြိမ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်၊ စစ်တပ်ထဲမှာကောင်းတဲ့အရာတွေသင်ယူခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါမုန်းတီးတဲ့လူတစ်ယောက်လိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုကြည့်ဖို့ထိုင်နေတာကိုငါမုန်းတယ်။ မနေ့ကမှကဲ့သို့ငါမုန်းတီးစရာကောင်းသောဒီမကောင်းဆိုးဝါးဝါးဒုစရိုက်ကိုစတင်ခဲ့ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်မလုပ်သင့်သည့်ခြေလှမ်းကိုလှမ်းခဲ့ခြင်းသည်အထီးကျန်ခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကင်းမဲ့ခြင်းတို့သည်ယနေ့မှားယွင်းစွာဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်၏အကြောင်းပြချက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်ရေးခဲ့သည်။
ငါမတိုးချဲ့ပေမယ့်မင်းကိုမိန်းမတစ်ယောက်လိုဆက်ဆံပါ၊ မင်းဟာမင်းသမီးလေးကိုဘယ်တော့မှမမြင်ရဘူး၊ ညစ်ညမ်းတဲ့မင်းသမီးရဲ့ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားမှာမဟုတ်ဘူး။ မင်းကဒါထက်ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိတယ်၊ သင်၏ခင်ပွန်းအတွက်ဆွဲဆောင်မှု၊ ဂရုစိုက်မှုနှင့်femတ္ဖြစ်မှု၊ သူနှင့်အတူကာမဂုဏ်ခံစားမှုရှိပြီးလိင်၌အလွန်တက်ကြွစွာအရသာရနံ့ကိုအမြဲတမ်းအသင့်ပြင်ဆင်ထားပါ။ သင်၏ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကိုဂရုစိုက်ပါ။ သူ့ကိုတစ်ယောက်တည်းမထားခဲ့ပါနှင့်၊ သူသည်သင့်ကိုသူလိုအပ်သည်။ သင်၏ဆက်ဆံရေးမှရုပ်မြင်သံကြားကိုထုတ်လွှင့ ်၍ ထိုနေရာအားလုံးရရှိသည်။ မင်္ဂလာပါနှင့်အောင်မြင်မှု။
ဒီစွဲလမ်းမှု၏ဆိုးကျိုးများသည်အလွန်ဆိုးရွား။ မပြောင်းလဲနိုင်သောအရာများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းသူမိန်းကလေးဖြစ်ပြီး ၁၀ နှစ်နှင့်သူ၏ဇနီးသည် ၇ နှစ်ကြာသည်။ ကျွန်ုပ်သူသိသည်မှာသူသည်သူသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်များစွာကိုကြည့်ရှုခဲ့သည်ကိုသိသည်။ ယောက်ျားများကဲ့သို့သောဤမျှလောက်များစွာသောရုပ်ရှင်ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ချစ်သူရည်းစားများမှာအလွန်ကောင်းသောဖြစ်ခြင်းကြောင့်သူသည်ထိုရုပ်ရှင်များတွင်တွေ့သမျှအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်အားထပ်ခါတလဲလဲပြောဆိုခြင်းကြောင့်ယောက်ျားများသည်ဤကဲ့သို့သောရုပ်ရှင်များစွာကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ သူသည်အခြားအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံနေသည့်အလားသူကကျွန်မကိုရင်သားပိုရချင်သည်၊ သို့မဟုတ်သူသည်ကျွန်ုပ်ကိုအရှေ့တိုင်းသို့မဟုတ်အနက်ရောင်ဖြစ်လိုသူဟုအမြဲပြောခဲ့သည်။ တစ်နေ့တွင်သူသည်ကျွန်ုပ်ကိုသူရဲကောင်းခြောက်ယောက်နှင့်ကျေနပ်စေလိုကြောင်းပြောခဲ့သည်အထိကျွန်ုပ်ငြင်းခဲ့သည်။ သူသည်သူကိုအာရုံမစိုက်ရန်ပြောခဲ့သည်မှာ၎င်းသည်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ခြင်းမျှသာဖြစ်သည်။ လမ်းသူမကသူမထိုကဲ့သို့ကြယ်ပွင့်နှင့်တူကြောင်းသူမအမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုကြည့်, ငါ့ကိုပြောတယ် p Orno …ဒါပေမယ့်အရာရာတိုင်းမှာသူဟာကျွန်မအပေါ်သစ္စာရှိခဲ့တယ်။ သူတို့အားလုံးဟာစိတ်ကူးယဉ်ဆန်တာတွေမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။
ငါသူ့ကိုတွေ့တော့ငါစူးစမ်းလေ့လာတာအားလုံးကိုပြောတယ်။ အစပိုင်းမှာသူကအရမ်းဒေါသထွက်ပြီးသူကပုံမှန်မဟုတ်တာမဟုတ်ဘူး၊ လူအားလုံးကထူးဆန်းတာဘာမှမရှိဘူးဆိုတာကိုလုပ်ကြတယ်။ ရက်အနည်းငယ်အကြာမှာသူဟာရုပ်ရှင်နှစ်ခု၊ သုံးခုကိုနေ့စဉ်ကြည့်နေတဲ့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကိုဝန်ခံခဲ့တယ် ငါသွားပြီးတစ်ချိန်ချိန်မှာငါ၌လုံလုံလောက်လောက်ရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်ငါနှင့်အတူမည်သည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုကိုမဆိုလိုတော့ချေ။ နောက်ပိုင်းတွင်ငါ၌ပြaနာတစ်ခုရှိကြောင်းလက်ခံခဲ့သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်ကိုမသိခဲ့ပါ။
ယခုသူသည်သူ၏စွဲလမ်းမှုကိုစွန့်လွှတ်ရန်ရုန်းကန်နေရသည်၊ ရုပ်ရှင်အားလုံးကိုဖျက်ပစ်သည်၊ သူသိမ်းဆည်းထားသည့်သေတ္တာအားလုံးကိုလွှင့်ပစ်လိုက်သည်။ သူသည်သာမန်လူသားတစ် ဦး ကဲ့သို့သူ၏ဘဝကိုပြန်လည်စတင်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်အာရုံကြောသို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုခံစားရသောအခါသူသည်ပြန်လည်သက်သာသွားသည်။ ကျွန်ုပ်နှင့်အတူသူသည်အရာရာအားလုံးကိုရေးသားရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်အလွန်ကြောက်ခဲ့သည်၊ အကြောင်းမှာနှစ်ပေါင်းများစွာသူသည်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူရှုထောင့်ပေါင်းစုံမှကင်းဝေးခဲ့ပြီးငါ့ကိုအလွန်ဆိုးရွားစေခဲ့သည်။ တကယ်တော့သူကကျွန်တော့်ကိုအပြစ်တင်ခဲ့တယ်၊ ငါ့ကိုသူအာရုံမစိုက်တော့ဘူးလို့ပြောတယ်။ အခုသူကငါနဲ့ပုံမှန်ဘဝဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ငါအရမ်းစိတ်ထိခိုက်နေတယ်၊ ​​ငါဟာလက်ရှိမှာကုထုံးနဲ့ရုန်းကန်နေရတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောသူနှင့်အတူနေထိုင်ခြင်းကြောင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသောကျွန်ုပ်၏ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုပြန်လည်ရရှိရန်အတွက် ... ကျွန်ုပ်တို့သည်ကွာရှင်းတော့မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်သူသည်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးတိုးတက်မှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းကျွန်ုပ်ဝန်ခံသည်။ တစ်နေ့ကျွန်ုပ်ချစ်သောယောက်ျားအတွက်ကျွန်ုပ်အလွန်စိတ်ပျက်မိသည်။ ဤမျှလောက်များစွာသော ... ဒီဟာငါ့အတွေ့အကြုံ၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစွဲခြင်းနှင့်အတူနှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်ခဲ့သောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏အတွေ့အကြုံဖြစ်သည် ia နှင့်ငါ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံအရထိုဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည့်အမျိုးသားအားလုံးကိုအာမခံထားသည်မှာ၎င်းတို့တွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးရှိခြင်းနှင့်ပျော်ရွှင်မှုရရှိခြင်းမှတားဆီးနိုင်သည့်ကြီးမားသောပြhaveနာတစ်ခုရှိကြောင်း၊ သူမအားအမြဲတမ်းမပြည့်စုံမှုနှင့်မပျော်မရွှင်ဖြစ်စေသောကြောင့်ဖြစ်သည် သူတို့သည်သင်၏ကိုယ်နှင့်သင်၏လိင်ဆိုင်ရာစိတ်ကူးစိတ်သန်းများနှင့်အလုပ်များလွန်းနေပြီးသင်ကသင်၏စိတ်နှင့်စိတ်အလုံးစုံကိုသိမ်းပိုက်လိုက်သည်။ သင်သည်ထိုပြistနာကိုကုထုံးပညာရှင်တစ် ဦး နှင့်စွမ်းအားများစွာဖြင့်မဖြေရှင်းနိုင် သ၍ ထိုသူသည်ယောက်ျားများဖြစ်လိမ့်မည်။
ချိန်းဆိုမှု၊ လွန်ခဲ့သောတစ်ပတ်ကကျွန်ုပ်ခင်ပွန်းနှင့်အတူအလားတူအခြေအနေမျိုးကိုကျွန်ုပ်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်သည်သူနှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်၊ အမှန်တရားမှာကျွန်ုပ်သည်အလွန်စိတ်ထိခိုက်နေဆဲဖြစ်သည်။ သူသည်သူ၏စွဲလမ်းမှုနှင့်အခြားသူများကိုအသိအမှတ်ပြုသော်လည်းကျွန်ုပ်ကိုကျော်လွှားနိုင်သည့်နာကျင်မှုကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ကိုင်တွယ်ရမည်ကိုမသိပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူကိုအရာရာတိုင်းအားလုံးအကုန်လုံးဖော်ပြပေးတဲ့အတွက်ငါကိုယ်ဝန်ရှိနေလို့ပါ။ ငါသူနဲ့အတူနေခဲ့တာပါ။ သူကပြသနာဖြစ်တဲ့အခါသူကငါ့ကိုအပြစ်တင်ပါတယ်။ ဘဝကိုတခြားနည်းလမ်းနဲ့ပြန်စချင်တယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော့်နိုင်ငံရှိအထူးကုဆရာ ၀ န်တစ် ဦး ထံသွားမှာပါ။ နောက်ဆုံးတော့သူ့ကိုငါအရမ်းတောင်းပန်ပါတယ်၊ သူကခွင့်လွှတ်ဖို့ခွင့်ပြုဖို့တောင်းပန်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူကအသက် ၃၀ ရှိလို့ကျွန်မအတွက်အရမ်းကိုခက်ခဲပါတယ် သူ ၁၀ နှစ်အရွယ်ကစပြီးပြwithနာတွေကမဂ္ဂဇင်းနဲ့စခဲ့တယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်တာကိုကြည့်ရတာအကန့်အသတ်မရှိဘူး။ သူနဲ့ကျွန်မကိုသီးခြားနေလို့ညတိုင်းအိပ်ရာဝင်ပြီးအိပ်ရာဝင်ခဲ့တယ်။ မနက် ၃ နာရီမှာသူလုပ်တာကသူ့အလုပ်ကြောင့်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့ဒီကြမ်းတမ်းတဲ့အဖြစ်မှန်ကိုမကြုံခဲ့ရဘူး။ ဗွီဒီယိုများနှင့်အခြားအရာများဖြစ်သော်လည်းအရာရာတိုင်းကိုအကန့်အသတ်မရှိသာကျန်ရှိနေသောအင်တာနက်သည်၎င်းသည်လုံးဝလွတ်လပ်သောကြောင့်ဖျက်သိမ်းခြင်းအတွက်မည်သည့်အရာမျှနောင်တမရပါဟုပြောခဲ့သည်။ ကောင်းကင်ကငါ့ကိုလိမ်ပြောသောကြောင့်သူ၏စကားကိုကျွန်ုပ်သံသယဖြစ်စေသည် မတိုင်မီ ... ငါအနာဂတ်အတွက်သားကိုသူ၏စွဲလမ်းမှုအတွက်ဖော်ထုတ်လိုစိတ်မရှိသောကြောင့်ကုထုံးသည်၎င်းကိုရင်ဆိုင်နိုင်ရန်အကူအညီဖြစ်သည်ဟုဘုရားသခင်ကိုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး၎င်းကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်အတွက်သင်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကမှလုပ်ဆောင်ပေးမည်မဟုတ်သောကြောင့်၎င်းကိုကျော်လွှားရန်သင်ကိုယ်တိုင်၏အလိုတော်များစွာကိုတင်ထားရမည်။ အကယ်၍ မင်းကဘုရားကိုယုံရင်မင်းကိုကောင်းကောင်းတောင်းပါ။ ငါ့အပိုင်း x ဘယ်သူ့မှမရှိဘူး၊ မင်းရဲ့အလိုတော်မှာမင်းကမင်းထက်ပိုပြီးကောင်းတဲ့သူဆိုတာမရှိဘူး၊ မင်းဒါကိုကျော်လွှားချင်ရင် ။ ဒါပေမယ့်တစ် ဦး ချင်းစီ၏ယုံကြည်ချက်လေးစားမှု။
ငါသိတာကရိုးရိုးလေးပါ၊ ဒါပေမယ့်တစ်ခုခုကိုလုပ်တာကအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပဲ၊ နည်းလမ်းရှာဖို့မကြိုးစားဘူး
ကျွန်မခင်ပွန်းအတွက်အရမ်းစိတ်ပျက်မိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ၃ နှစ်သာလက်ထပ်ပြီးသာယာတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ရခဲ့တယ်။ သူသည်ကျွန်ုပ်ထက် ၁၇ နှစ်ကြီးပြီးလွန်ခဲ့သောလများကသူသည်ညစ်ညမ်းသောစာမျက်နှာများနှင့်ချိန်းတွေ့သောဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့မကြာခဏလည်ပတ်လေ့ရှိပြီးတစ်ကိုယ်ရေအဖြစ်ဟန်ဆောင်ကာ ၃၇ နှင့် ၃၈ တွင်သူသည်အလွန်ရယ်စရာဖြစ်သည်။ ငါဘာလုပ်ရမှန်းမသိသေးဘူး၊ ငါ့အိမ်မှုကိစ္စတွေလုပ်နေတာအပြင်၊ ငါဟာချစ်ခြင်း၊ ရယ်စရာ၊ sexy၊ အရာရာတိုင်းမှာသူ့ကိုထောက်ပံ့တယ်၊ ငါတို့ဟာအမြဲတမ်းထွက်နေပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းစွာပြုပြင်နိုင်ခဲ့တယ်၊ မွေးဖွားပြီးနောက်။ သူကကျွန်မကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးကျွန်မတို့ကအရမ်းကောင်းသောလိင်ရှိသည်။ သို့သော်သူသည်အဘယ်ကြောင့်သူသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုမကြာခဏဖတ်လေ့ရှိသနည်း။ ငါသူ့ကိုတွေ့တဲ့အခါသူကမြောက်အမေရိကမှာယောက်ျားရောမိန်းမရောပါပုံမှန်ပဲ၊ သူမှာပြproblemနာမရှိဘူး (သူကလက်မခံဘူး) ပြောတယ်။ သူသည်ကနေဒါရှိဘဏ်ရှိကွန်ပျူတာဌာန၏နည်းပညာဌာန၌အလုပ်လုပ်သည်။ သူ၏ပြproblemနာကသူအလုပ်တွင်လည်းသူ့အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်စိုးရိမ်သည်။ စာမျက်နှာ ၂ ခုကိုငါဖျက်ပြီးပါပြီ အကြိုက်ချင်းမတူပေမယ့်နောက်စာမျက်နှာတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်တယ်။ သူကိုချစ်နေတုန်းပဲ။ ငါသစ္စာဖောက်ခံရတယ်၊ ငါသူ့ကိုမချစ်တော့ဘူးအကြိမ်ပေါင်းများစွာသူနဲ့အထူးအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေလိုချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့သူ့ပြproblemနာကိုငါမှတ်မိပြီးသူမထိုက်တန်ဘူး , ဒါကြောင့်ငါလုပ်ပေးဒါကရပ်တန့်။
ကျွန်ုပ်သည် ၂၉ နှစ်ရှိပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်ခရစ်ယာန်မိသားစုတွင်ကြီးပြင်းလာပြီးယနေ့ကျွန်ုပ်သည်ဘုရားသခင်နှင့်ဝေးကွာသွားပါသည်။ ငါအသက် ၁၄ နှစ်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုကြည့်ပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာစတင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဆောင်မှုနှင့်ကျွန်ုပ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်နည်းလမ်းသည်အလုပ်၊ မိသားစုနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်အကျိုးသက်ရောက်သည်။ ငါရည်းစားတစ်ယောက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အရေးကြီးတဲ့အလုပ်တစ်ခုဒီနေ့မှာငါဘွဲ့လွန်သင်တန်းကိုတက်ဖို့ကြိုးစားပေမယ့်ဒီဆိုးညစ်မှုကြောင့်သူတို့က ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်တယ်။ ငါ porn ဗီဒီယိုများငါ့ကိုစိတ်လှုပ်ရှားမရှိတော့နောက်မှလာမထားဘူးသောဇာတ်စင်၌ရှိ၏။ ငါအကူအညီတောင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ စိတ်ပညာရှင်တွေကငါ့ကိုမကူညီဘူး၊ Santiago de Chile ရှိလိင်ဆိုင်ရာပညာရှင်တစ်ယောက်ဆီသွားလည်ပတ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်တစ်ခေါက်လျှင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅၀ နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းသည်အလွန်စျေးကြီးသည်။
အကယ်၍ မင်းတစ် ဦး ဦး ကစိတ်ဝင်စားလျှင်၊ freddy.tk@hotmail.com
ကျွန်ုပ်သည်ရည်းစားနှင့်ဆက်ဆံမှုကို ၆ နှစ်ကြာခဲ့ပြီးအတူတကွနေထိုင်မှုသုံးခုကျဆင်းခဲ့သည်။ အချိန်တန်သော်သူသည်ကျွန်ုပ်အားဆန္ဒမရှိခြင်းကိုသဘောပေါက်လာသည်။ နောက်ဆုံးတွင်သူသည်သူသည်ညစ်ညမ်းမှုစွဲနေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်၊ သူကငါကိုပိုကြိုက်တယ်၊ ငါကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိုဆိုးလာတယ်၊ မထီမဲ့မြင်ပြုတာ၊ ပိုပြီးမထီမဲ့မြင်ပြုတာ၊ သူငါ့ကိုဘယ်တော့မှမထိဘူး၊ ငါ့ကိုနမ်းမယ်ဆိုရင်ပွေ့ဖက်လိုက်တယ်ဒါပေမယ့်ညရောက်ရင်သူကငါ့ကိုပွေ့ဖက်ထားတယ်၊ သူကငါ့ကိုချစ်ပေမယ့်ငါမခံစားရသလိုခံစားခဲ့ရတယ်၊ ငါနဲ့အတူလိင်ဆက်ဆံပါ။ ငါ့အတွက်ကောင်းကင်ပြာပြိုကျသွားသလိုမျိုး၊ ဖြစ်ပျက်လာတာတွေကနေမိန်းမငယ်လေးလိုငါခံစားရတဲ့အခန်းကဏ္explainကိုရှင်းပြဖို့ခဲယဉ်းတယ်။ ငါဆန္ဒရှိမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနှိုးရမလဲ၊ အခုသူမကငါ့ကိုလေးစားမှုမရှိကြောင်းသူမမြင်ပေမဲ့အဲဒါကငါ့ရဲ့အလှည့်ပါ။ ငါသူ့ကိုမေးတဲ့အခါသူကဖြေတယ်၊ ​​မင်းကတခြားကိုသာလိုချင်တယ်၊ မရေမတွက်နိုင်သောနာကျင်မှု .... ငါ့ကိုဘယ်သူကူညီပေးနိုင်မလဲ ???
အယ်လန် baquedano ဟုသူကပြောသည်
allan baquedano အားပြန်ကြားပါ
ငါနှင့်အတူတူပါပဲ၊ အရာအားလုံးအတူတူပင်၊ ကျွန်ုပ်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုမသိပါ၊ ကျွန်ုပ်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးသူသည်ကျွန်ုပ်ကိုချစ်သည်ဟုဆိုသော်လည်း၊ ငါသည်မိန်းမငယ်လေးကဲ့သို့ခံစားရ၏၊ ငါ့ကိုမထိပါစေသူသည်ငါ့ကိုပွေ့ဖက်နမ်းရှုံ့သည်
ငါနင့်ကိုအတူတူသွားတွေ့ရင်ငါနင့်ကိုချစ်တယ်။ ဒါပေမယ့်သူကငါ့ကိုချစ်ပေမယ့်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ပိုချစ်တယ်၊ အရှက်ခွဲခံရတယ်၊ ဂုဏ်သိက္ခာကျတယ်၊ သူကငါ့ကိုပိုချစ်တယ်၊ မင်းကလှတယ်၊ မင်းကိုချစ်တယ်လို့မခံစားရဘူးလို့ပြောနေဆဲပဲ၊ : ´(
ငါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီးလေးနှစ်ခန့်ရှုံးနိမ့်ခဲ့သည်၊ ၎င်းသည်စိတ်၏ပြorနာမဟုတ်ပါ၊ ယင်းကိုရပ်တန့်ရန်လူ့ခွန်အား၏ပြproblemနာမဟုတ်ပါ။ ခရစ်တော်ကိုကျွန်ုပ်၏နှလုံးသားထဲ၌လက်ခံသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဒူးထောက်ကာဘဝကိုပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲပြောင်းလဲလိုက်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်မပြုလုပ်တော့ဘဲညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ခြင်းကိုမရပ်တော့ပါ။ ခရစ်တော်သည်သင်၏အသက်တာကိုအုပ်စိုးပါစေ၊ သူသာလျှင်သင့်ကိုကူညီပါလိမ့်မည်။ ယေရှုခရစ်သည်သင်တို့ကိုချစ်တော်မူ၏။
ငါ၌ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲစွဲနေသော ၁၇ နှစ်အရွယ်သားတစ်ယောက်ရှိသည်။ သူနှင့်စကားပြောရန်မသိတော့၊ သူသည်ရေချိုးခန်းအတွင်းသူကိုယ်တိုင်သော့ခတ်ထားခြင်း၊ သူနှင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်လည်းကောင်း၊ သူ၏မိတ်ဆွေများနှင့်အဆိုးဆုံး - အဆက်အသွယ်နှင့်အတူထွက်မသွားချင်ပါ။ သူ့အစ်ကိုကသူ့အစ်ကိုအရက်သောက်ခြင်းကိုလုပ်သလိုမျိုးသူသည်လေးလံသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုသူကြည့်နေခြင်းလော။ ကျေးဇူးပြုပြီးကူညီပေးပါ ???? ငါတော့ဘူးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူး
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ကိုစာရေးပါ aguilar220@hotmail.com
max ကို ဟုသူကပြောသည်
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေဟာရောဂါတစ်ခုဖြစ်တာသေချာတယ်၊ ကျွန်မခင်ပွန်းကအရသာကိုစတင်ရရှိခဲ့ပြီးဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုသီးခြားစီခွဲထားတယ်၊ သူကငါ့ကိုချစ်တယ်လို့ပြောတယ်၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်ဟာချစ်ခြင်းမေတ္တာကင်းမဲ့နေကြတာကြောင့်မကြာသေးခင်ကငါ့သမီးကသူနဲ့လိင်ဆက်ဆံသူရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါညည်းညူပြီးသူကသူကဓာတ်ပုံကိုယူခဲ့တယ်၊ ငါကမှိန်နေတာပေါ့။ ငါပြန်ဖြေလိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းကိုငါဒီလိုချစ်တယ်။ ၎င်းသည်တည်ရှိခြင်းမရှိပါ။ ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာဖြင့်ကလေးငယ်များအားလိင်ဆိုင်ရာလိင်မှုကိစ္စပြုရန်ကြိုးပမ်းသောကြောင့်၎င်းသည်ကူးစက်လွယ်ခြင်းအတွက်အကြောင်းပြချက်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်သူသည်ညစ်ညမ်းသောအရာအားလုံးကိုပြောင်းလဲပစ်လျှင်၎င်းသည်သူအသက်ရှင်ရန်လွတ်လပ်ခွင့်မရှိလျှင်သူပြောင်းလဲလျှင်သူ၏စောင့်ဆိုင်းနေမှုအားစောင့်ကြည့်နေသည်။ ဟေးဟေးဟေးဟေးဟေးဟေ့ဟ .. ဟ .. ဟ .. ဟ .. ဟ .. ဟ .. ဟ .. ဟေးဟေးဟ .. ဟ .. ဟ .. ဟ .. ဟေးဟေးဟ .. ဟ .. ဟ .. ဟ .. ဟ .. ဟေးဟေးဟ .. ဟ .. ဟ .. ဟေးဟေးဟင် .. သူကအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံခဲ့ရတယ်။
လူအများအတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေဟာအပြစ်တစ်ခုလို့ထင်ရတယ်။ ငါဟာအမြဲတမ်းဘ ၀ ကိုကောင်းတာမကောင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစဉ်းစားနေတယ်၊ ​​အဲဒါကငါတို့ဘယ်လိုရှင်သန်နေတယ်ဆိုတာကိုခိုးယူတာမကောင်းဘူးဆိုတာငါတို့သိတယ်။ ငါတို့ကဒါကတခြားကိုအကျိုးသက်ရောက်တယ်၊ ဒါကြောင့်ခိုးတာဟာမကောင်းဘူးလို့လူမှုရေးအရသဘောတူထားတယ်။ နိမ့်ကျတဲ့လူ့ဗီဇကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အခြားသူရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကိုရယူချင်တဲ့စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဥပဒေတွေကိုတီထွင်ခဲ့တယ်။ တစ်စုံတစ်ရာကိုခိုးယူခြင်းသည်ယာယီအကျိုးအမြတ်ဟုယူဆသော်လည်းလွတ်လပ်မှုဆုံးရှုံးခြင်း၊ အချို့သောရိုက်နှက်ခြင်းကြောင့်ကျန်းမာရေးသို့မဟုတ်အသက်ဆုံးရှုံးခြင်းအတွက်မြင့်မားသောစွန့်စားမှုဖြစ်သည်။ ထိုအရာများသည်မှားယွင်းသောအရာ၏အကျိုးဆက်များဖြစ်သည်။ အလားတူပင်လူ့အဖွဲ့အစည်းကလိင်အားဖြင့်အတင်းအဓမ္မလိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်အခြားသူကိုအကျိုးသက်ရောက်ကြောင်းသိသည်။ ထို့ကြောင့်ခိုးမှုကဲ့သို့အပြစ်နှင့်ရာဇ ၀ တ်မှုဟုလည်းယူမှတ်ကြသည်။ တစ်ခုခုလုပ်လိုခြင်းသည်လုံးဝမှားသည်မဟုတ်။ သို့သော်၎င်းကိုလိုချင်သည်ကကျွန်ုပ်အားယင်းသို့ပြုလုပ်ရန်လှုံ့ဆော်ပေးသည်ဆိုပါကထိုဆန္ဒသည်အနှေးနှင့်အမြန်ဖြစ်လာနိုင်သည်၊ အနှေးနှင့်အမြန်ကျွန်ုပ်၏လမ်းစဉ်ကိုစွန့်လွှတ်ပြီးအပြစ်သို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုကိုကျူးလွန်လိမ့်မည်။
ဒါကြောင့်အပြစ်လုပ်မိတာကသင်ကိုယ်တိုင်အပါအ ၀ င်အခြားသူတစ်ယောက်ကိုမင်းကိုထိခိုက်စေတာပဲလို့ငါထင်တယ်။ ထို့အပြင်အခြားသူကိုနာကျင်စေသူမည်သူမဆိုအပြစ်ရှိသည်ဟုခံစားရပြီးမသိစိတ်၌မိမိကိုယ်ကိုအလွန်နိမ့်ကျ။ အနိမ့်ကျသောပုံရိပ်ကိုဖန်တီးသည်။ အကြင်သူသည်မိမိအိမ်နီးချင်းကိုမရိုသေ၊ ကောင်းပြီ, သူကသူလုပ်နေတာကသူနဲ့တန်းတူဖြစ်ဖို့၊ သူနဲ့တူတူပဲဖြစ်ဖြစ်ကွဲပြားခြားနားတယ်လို့ခံစားရပေမယ့်လည်းခံစားရသလိုမျိုးသူလုပ်တာကမဆိုးဘူးလို့ထင်တယ်။
ဤနည်းသည်အပြစ်သည်သူတစ်ပါးကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်ထိခိုက်နစ်နာစေသည့်အရာဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အကျိုးကျေးဇူးများရှိသည်။ ကျနော့်အမြင်တွင်သင်သည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူလိင်ဆက်ဆံမှုကိုမည်ကဲ့သို့လေ့လာသည်၊ လက်မထပ်မီလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုစိတ်မ ၀ င်စားပါက၎င်းသည်သင့်ကိုဖွင့ ်၍ သင်၏ဆက်ဆံရေးကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောသဘာဝအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ လူကြီးများဘာလုပ်သည်ကိုသင်သိသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင်ယင်းကိုတွေ့ကြုံခံစားလိုပြီး၎င်းသည်မလိုလားအပ်သောကိုယ်ဝန်ကဲ့သို့သောအကျိုးဆက်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အကြောင်းမှာစုံတွဲများစွာသည်ကလေးတစ် ဦး ရောက်ရှိလာခြင်းကိုအံ့အားသင့်ကြသော်လည်း၊ သူတို့ကိုယ်တိုင်ဂရုစိုက်ကြသော်လည်းအချို့မှာမူအစီအစဉ်မရှိသေးပါ။
စွဲလမ်းလာသည်နှင့်သင်အမှန်တကယ်အသက်ရှင်ရန်ထက်သင်၏စိတ်တွင်စိတ်ကူးရန်ပိုနှစ်သက်နေရာဖြစ်သည်။ နှစ်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှမင်းတစ်ယောက်တည်းကျန်ရစ်တယ်၊ အိုမင်းရင့်ရော်လာပြီ၊ မိသားစုမရှိတော့ဘူး၊ သင့်မှာသူတို့ကိုလျစ်လျူရှုထားသူတစ်ယောက်ရှိရင်လည်းသူတို့ကရုပ်ဆိုးပုံရတယ်။ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကမင်းကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာမလိုတော့ဘူး၊ မင်းကအမြဲတမ်းအသစ်တစ်ခုကိုလိုချင်နေတယ်၊ ​​စွဲလမ်းစေတဲ့အရာတွေမှာလိုမင်းကိုမချစ်တဲ့သူနဲ့တစ်ခြားသူကိုပိုနှစ်သက်တဲ့သူနဲ့တွေ့ရတာဝမ်းနည်းစရာပါ။ ၎င်းသည် virtual ဖြစ်နေလျှင်ပင်။ ၎င်းသည်စိတ်ကူးယဉ်စိတ်ကူးတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်တကယ့်အရာမဟုတ်ပါ၊ အပျော်အပါးသည်မှန်သော်လည်း၊ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်မိန်းမနှင့်ချစ်ခြင်းထက်စိတ်ကူးသည်မတူပါ။ ဆိတ်ကွယ်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအတွက်သာ။ ကြီးမြတ်သည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုစွန့်ခွာလိုသူများအတွက်ဘုရားသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။ ကောင်းမြတ်ခြင်းနှင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းဆီသို့ ဦး တည်စေသည့်အရာတစ်ခု၏အယူအဆမှာ၎င်းသည်တည်ရှိနိုင်သည်ဆိုလျှင်၎င်းသည်သင့်အတွက်အမှန်တကယ်ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။ သင်မယုံသေးဟုသင်ယခုပင်စိတ်ကူး။ မရသောသင်၏စိတ်ထဲနှင့်သင်၏စိတ်ကိုနေရာတစ်နေရာသို့ပို့ဆောင်ပေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်ထိရောက်သောဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုဖြစ်သည်မှာများသောအားဖြင့်မှန်ကန်သည်၊ အကြောင်းမှာသင်သည်ဝိညာဉ်ရေးကိုသာအာရုံစူးစိုက်။ ကောင်းသောစိတ်ဓာတ်ဖြင့်ပြည့်နှက်နေပြီးသင်ပင်လျှင်မကောင်းမှုသို့မဟုတ်အပြစ်ကိုမပြုလုပ်လိုသည့်အချိန်ရောက်လာသည် မင်းစဉ်းစားတယ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီလည်းပေးတယ်၊ ဒါပေမယ့်နှစ် ဦး စလုံးလမ်းညွှန်သင့်တယ်။ သင်လိုချင်သမျှကိုသင်အမှန်တကယ်လိုချင်လျှင်ပြနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ကံဆိုးပေမယ့်မင်းကအမြဲတမ်းယုံကြည်ခြင်းရှိရမယ်။
ငါလိင်စွဲလမ်းနေတယ် ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စွဲလမ်းစေသောပြproblemနာကိုဖြေရှင်းရန်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအောင်မြင်ရန်ရည်ရွယ်သည့် ၁၂ ဆင့်ပါအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခု၏အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည်။
liliana Rodriguez ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်သည်အာဂျင်တီးနားမှ Bs မှလီလီယန်ဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့သော ၁၀ လခန့်ကသြစတြေးလျနိုင်ငံမှဝေးလံသောအခြားနိုင်ငံမှအမျိုးသားတစ် ဦး နှင့်ကျွန်ုပ်စကားပြောခဲ့သည်။ သူကဂရပ်ဖစ်ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ကျွန်ုပ်အားအဆိုပြုခဲ့သည့်အချိန်တွင်သူသည်သူ့အိမ်၌ထည့်ခဲ့သည်၊ ၎င်းသည်သူ့နိုင်ငံနှင့်ကျွန်ုပ်၏မြေပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။ သို့သော်သူသည်ဆံပင်မလှုပ်ရှားကြောင်း၊ သူသည်ကြည့်ရုံမျှသာမကသိမြင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်သူကြိုက်နှစ်သက်ပါကကျွန်ုပ်သူ့ကိုပြောပြသည်ဟုသူကပြောသည် သူကလိင်တူဆက်ဆံသူစုံတွဲများနဲ့သက်ဆိုင်တယ်။ သူဟာပါးစပ်ကလိင်ဆက်ဆံတာဖြစ်ဖြစ်၊ သူကငါပဲလိင်တူချစ်သူလား၊ ငါမသိတဲ့လိင်တူချစ်သူလားဆိုတာငါသိတယ်။ ငါသိတာတစ်ခုကသူဟာငါကိုကြိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါသိတယ်။ သူကငါနဲ့လိင်ဆက်ဆံတာကိုမစွဲလမ်းဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ သူကငါနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးသွားတဲ့အခါသူကသူအလုပ်သွားမယ်လို့ပြောတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူကသူကို Skype နဲ့ချိတ်ဆက်နေတယ်၊ ​​သူဟာတခြားသူတွေနဲ့ဆက်သွယ်နေတယ်၊ သူကကျွန်တော့်ကို facebook msg ကသူ့ကွန်ပျူတာထဲမှာရေးပြီးသူမှာဆဲလ်ဖုန်းမရှိဘူးလို့ပြောတယ်။ ငါဖေ့စ်ဘုတ်စကားဝိုင်းမှာချိတ်ဆက်မိတဲ့ဖုန်းရဲ့ပုံဆွဲတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ သူသည်နာမကျန်းဖြစ်နေသူသို့မဟုတ်အခြားအရာများကိုနှစ်သက်သူသည်သင်ငါ့ကိုအကြံပေးပါ၊
liliana rodriguez အားပြန်ပြောပါ
စာမျက်နှာများကိုတောင်ပိတ်ချင်သော်လည်းတင်းမာမှုများမှကြည့်ရှု။ အနားယူလိုသူတို့သည်ထိုစာမျက်နှာများကိုပြန်ဖွင့်ရန် make ကူညီပေးပါ။
Orlando တွင် ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အပေါ်စိတ်ပျက်မိသည်။ ၎င်းသည် nalgotas »၏စာမျက်နှာတစ်ခုသို့စာရင်းပေးသွင်းပြီးသည်နှင့်သူကျိန်ဆိုခဲ့ပြီးသူမလုပ်ခဲ့ဟုကျိန်ဆိုမိသည်ကသူသည်၎င်းကိုမပြုလုပ်ခဲ့ဟုပထမဆုံးကျိန်ဆိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ သူ့ Gmail ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်၊ ဖြစ်ပျက်တာအားလုံးကိုမေ့သွားတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီနေ့ကျွန်တော်သူ့ကိုထပ်တွေ့ပြန်ပြီ၊ သူဟာသမိုင်းကိုဖျက်ပစ်ဖို့မေ့သွားတယ်၊ အဲဒီမှာသူဟာနောက်စာမျက်နှာတစ်ခုမှာရှိနေတယ်၊ ​​ငါသူ့ကိုတိုင်ကြားတဲ့အခါသူအရမ်းအံ့သြသွားတယ်၊ \_ t ထပ်ခါတလဲလဲကျိန်ဆိုမိသည်မှာသူမဟုတ်ပါ၊ သူ၏ရုံးခန်းတွင်မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ရုပ်ပုံများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသောအခါဘာမှမယုံတော့ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ပြူရီတန်တစ် ဦး မဟုတ်ပါ။ သို့သော်သူသည်ဆုတောင်းပြီးဆက်လက်ဆုတောင်းသည်။ \_ t ဟောပြောချက်တွေပေးတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုမယုံတော့ဘူး၊ ယုံကြည်မှုအကြောင်းအများကြီးပြောပြီးသူလေးစားခဲ့တယ်။ သူဟာလေးနက်ပြီးပညာတတ်လူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးခိုင်မာတဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားစံနှုန်းတွေရှိတယ်၊ သူနဲ့သူမလှည့်စားတာကိုငါမကျူးလွန်ချင်ဘူး။ သူကကျွန်တော့်ကိုဇနီးမောင်နှံအဖြစ်စိတ်ပျက်ခဲ့တယ်။ လိမ်ညာမှုကြောင့်၊ ငါအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းစိတ်ရှုပ်ထွေးစရာတွေ၊ အရာရာတိုင်းနီးပါး၊ လိင်အကြောင်းပြောခဲ့တယ်၊ သူနဲ့သူမနေချင်တော့ဘူး၊ သူကပြူရီတန်တုံးလို့ထင်တယ်၊ အတု။ Orgies နှင့် porn သည်ကျွန်ုပ်အတွက်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ရှေးရိုးအစဉ်အလာ ဖြစ်၍ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်လေးစားမှုကိုယုံကြည်သည်။ ငါအထီးကျန်ဖြစ်ဖို့မပျော်ဘူး၊ မင်းကမင်းကိုလှည့်စားပြီးပျော်ရွှင်နေမယ်ဆိုရင်။